Strategy Report for Safety, Health and Environment by Miki & Wallis - Issuu
Responsible Mining Myanmar Yang Tse Copper Limited 2012 2013 Environmental & Social Sustainability Safety, Health & Conservation Programming
Community Support Village Medical Care & Education Employment & Opportunity
Developing with Care Every Step of the Way MytCl Strategy Report for Safety, Health and Environment of the Sabetaung & Kyisintaung Mines
Inside this Edition Message from the Chairman ..................................................................................................................................4 A Word from the General Manager ......................................................................................................................5 Mission Statement, Code of Ethics & Environmental Policy.........................................................................7 International Certifications .................................................................................................................................12 An Introduction of Sabetaung & Kyisintaung Operations	About MYTCL .....................................................................................................................................................14 S.H.E. Report ..............................................................................................................................................................16 ......Safety, Occupational Health & Environmental Management..............................................................18 Taking Care of Our Greatest Asset – Our People
Safety Performance................................................................................................................................ 22
Health Performance ...............................................................................................................................23
Mine Site Clinic .........................................................................................................................................24
Mine Town Hospital ................................................................................................................................24
Medical Services in Yangon..................................................................................................................24
Creating Jobs for the Impoverished .................................................................................................27
Technical & Trades Training ..................................................................................................................27
Safety and Environmental Training................................................................................................... 28
Environmental Management Systems ............................................................................................ 32
Earth, Wind and Acid Impact Management......................................................................................33
Containing Hazardous Materials........................................................................................................35
Village Education on Environmental Concerns ............................................................................ 38
Community Support initiatives ..........................................................................................................................41 New Projects
Employee Organizational & Operational Development ............................................................44
Policies for the People ..........................................................................................................................45
Mine Closure Planning ..........................................................................................................................................48 Verification Statements
SGS - Société Générale de Surveillance............................................................................................50
Knight Piésold Consulting ....................................................................................................................51 3
The environmental concerns at local and regional levels have highlighted the importance that we, the Monywa Copper Mine Project and MYTCL, have placed on cooperation, consensus building, communication and the involvement of international environment agencies in policy-making decisions.
Mineral resources continue to play an important role in Myanmarâ&#x20AC;&#x2122;s economy by contributing to job generation, government revenues and the course of industrialization. Building on the results achieved so far and on the lessons learned from our experiences, we are identifying concrete policy actions and measures that will ease the present social challenges and advance sustainable development regarding social and economic themes. The enhancement ofa10-year framework of environmental programs is the corner stone issue that will be thoroughly analyzed and integrated into the 2013 year of progress by the management of MYTCL.
We should not forget that the core of sustainable development is human development and progress. By improving the quality of life, by using local and natural resources and by promotingahealthy environment, we will succeed in preserving the Earthâ&#x20AC;&#x2122;s life-support systems for present and future generations. As Chairman and Managing Director of MYTCL, I commit myself to work with all of you in order to facilitate harmony and ensure the success of our futures.
Chairman and Managing Director MYTCL
Friends, Family, Employees, Clients and Critics; I welcome you all to our Environmental Strategy Report for the year 2012 and our defined International tactics for 2013 onward. It has always been my belief that people constitute 75% or more of any business, regardless of the type of industry they represent. We as Management may have great visions and fantastic plans, but nothing is capable of coming to fruition without people making it happen; People who are motivated, who are enthused and people who are diligently committed to delivering to the best of their abilities.
It is not justamatter of hiring good people, although in an industry such as ours this isavital step. It is alsoamatter of providing those people we already have within our Organization with the necessary tools they need, and rewarding people whom we believe to have the proper background and the appropriate skills with the opportunities to advance and succeed. The most important tool we have to offer is knowledge, knowledge of the environment in which we work, knowledge of safety in every area of the production of our Cathode Copper, as well as the knowledge to preserve and rehabilitate our lands to reduce the environmental footprint that mining is undeniably capable of creating, should care not be taken.
I believe we have builtagreat company, and thus far we have made improvements that positively impact each and every employee of MYTCL. We will continue on this path to encourage, hire and reward the very best of Myanmar Nationals into, and from within, our company. In the final analysis the companies which achieve the best results are the ones with the best strategies, with positive futures for the employees and that allows the workforce to grow alongside the business aspects of development. I have confidence in you, in our goals and in our mutual future asadistinguished company.
I look forward toayear of success and prosperity for us all!
General Manager MYTCL 5
Myanmar Yang Tse Copper Limited MYTCL, was established withavision that there is essential value, personal reward and financial stability in supplyingaquality product derived from the unified labor forces ofalocal mining community. We, meaning each employee of MYTCL, succeed because we are part ofamuch larger community to which we are compelled to act responsibly. Our accountability is transparent as we build local and National relationships, provide economic opportunity fairly, work safely, and consider the environmental impacts in all of our affairs. Our central focus is providing sustainability in the social, ecological and conservational aspects of the mining projects that fall under our umbrella, utilizing the International Standards of Nations from around the world. Our goal is to cultivate our organization asaleader in the industry, setting the bar for delivering the highest level of Environmental Management Systems and to share our expertise as educational partners for all the people within the Republic of the Union of Myanmar.
Our Core Values solidify who we are... and what we believe.
MYTCL’s core values drive everything we do. Incorporating these core values into our daily work and making them an integral part of our culture is the key to our continuing success. •	Uncompromising Commitment to Quality, Health, Safety and Environment •	An Open Relationship with our Employees based on Mutual Trust, Respect and Success •	Transparency, Accountability and Discipline in our Business •	Responsible Leaders in the Industry-Risk Awareness •	Integrity in All We Do •	Financial Accountability to our Stakeholders
MYTCL is dedicated to the ethic that embodies
operations under our control including prevention
responsible planning and management of resources.
of environmental contamination.
As an industry leader inachallenging profession, we recognize the need for social responsibility and bringing stewardship to the preservation of our environment. We are constantly working with our
•	To comply with applicable legislation and to surpass relevant industry standards. •	To conserve, rehabilitate and protect natural resources while reducing waste and emissions.
global partners, contractors and suppliers to find
We ensure our projects conform to these objectives
sustainable solutions to our projects while proactively
through our internal policies and procedures, as
protecting the world around us.
well as with International training, programs and
MYTCL’s primary environmental goal, as laid out in
assessments. Our success is measured through the
our Code of Business Conduct, is the prevention of
establishment of regimented and scientific objectives
environmental contamination and the rehabilitation
withaconstant review of the progress made towards
of our production footprint. We strive to develop
techniques and utilize products and equipment that: •	Have no environmental impact. •	Meet or exceed International Standards. •	Are efficient in their consumption of energy. •	Can be recycled, reused or disposed of safely. MYTCL’s Code of Business Conduct requires all employees to conduct their duties and responsibilities in compliance with all applicable laws and current industry standards when it comes to pollution prevention. We not only train our employees in the areas of environmental awareness and relevant environmental issues, but also the communities and villages in our regions. Our efforts to createasustainable future take precedence in our three major objectives: •	To reduce the potential environmental impact of
and sustained in adherence to SGS - Société Générale de Surveillance guidelines and stringent management of conformity.
International certifications have been awarded to MYTCL
•	OHSAS 18001 Certificate relating to Occupational Health
•	ISO 14001 Certificate for Environmental Management •	ISO 9001 Certificate relating to Quality Management
In 2012 MYTCL maintained cathode quality in accordance with LME Grade A specifications, as well as sustainingabest
practices international performance standard throughout operations, while achieving continual improvements in
value, environment, health and safety standards.
An Introduction of Sabetaung & Kyisintaung Operations
The Sabetaung and Kyisintaung (S&K) Mine is
businesses at home and abroad, based on the
located in the Monywa District of Sagaing Division in
principles of international cooperation and mutual
Myanmar. Established early in the 20th Century, west
benefit, Wanbao Mining is developing high-quality
of the Chindwin River, the mine site is approximately
mineral resources from around the world.
40-minutes by road from Monywa and withinapopulated area of nearly 500,000 people. This semi-
This Environmental Strategy booklet exhibits defined
arid expanse offers about 700mm of annual rainfall,
evidence that Myanmar Yang Tse Copper Limited
and where shrub-covered rolling hills and Palm trees
is leading the industry in Myanmar in regards to
dotting the landscape are the common scene.
safety, health and environmental impacts. It is with
Many international companies have been involved in
dedication to the people, the future and the country
the development of this mine under several eras of
of the Republic of the Union of Myanmar. MYTCL is
ownership. Pit re-optimization of the Sabetaung and
proud to present to the public this transparency of
Sabetaung South deposits was completed in 2006
with consultants from GRD Minproc, an Australian
consultancy group. In September of 2000 the
concerns, questions or comments. MYTCL maintains
Kyisintaung pit optimum design was also completed
an open door policy for not only our employees, but
by this company. Others such as Knight PiĂŠsold Pty
also for our extended communities.
Limited, Coffee Partners International Pty Ltd., The World Bank, Westec (Welsh Engineering Science & Technology, Inc.), Haskoning (Royal Dutch Consulting Engineers and Architects), Golder Associates and Ivanhoe are some of the more prominent world-class names that have been involved in the consultation and operations of the S&K projects.
Today the S&K Mine is operated by Wanbao Mining Limited with the name of Myanmar Yang Tse Copper Limited â&#x20AC;&#x201C; MYTCL.
Joining hands with mining
The S.H.E. Report Safety, Occupational Health & Environmental Management
MYTCL’s Integrated Management Systems Policy provides the foundation for sustained, high quality, safety,
performance. Standard operating procedures and departmental instructions provide safe work systems while internal and external audits provide assurance and feedback for improvement planning. MYTCL’s
Occupational Health & the Environment Management relies on: •	Line management ownership and responsibility for SHE performance. •	Clearly documented SHE objectives and targets for line management and employees through management programs. •	The provision of training to help supervisors and employees identify hazards, potential injuries and to encourage personal action to minimize risks. MYTCL’s
health, the environment and product stewardship is unwavering. MYTCL manages all its activities with concern for people, communities and the environment, and conducts its business for the benefit of society without compromising the quality of life for future generations. This is MYTCL’s commitment to ensuringalong-term, sustainable business that is socially and environmentally responsible, and which providesagood return on investment to the shareholders.
Achieving Ecologically Sustainable Development
MYTCL maintains long-standing preventative and
planning developments for environmental protection,
improvement and management are available for
outlined in detail in the MYTCL Sabetaung â&#x20AC;&#x201C; Kyisintaung Project Environmental Control Procedure Manual (ECP). Last updated 14th December 2012, and approved by the Project Operations Manager and the General Manager. The ECP Manual, designed and implemented based on Environment Australiaâ&#x20AC;&#x2122;s incorporation of the environment programs of the Federal Department of the Environment and Heritage, and integrating the Myanmar ME1 legislations distributes the conservational considerations of the MYTCL mining organization into 36 specific areas relating to ecological maintenance, sustainability, preservation and rehabilitation, as well as safety precautionary contingency planning. Attached to these 36 areas are 13 MYTCL authorities whose expertise is directly related to each category.
A Condensed3Part Overview The following points are an outline of the best practices, existing activities, plans in action and means of execution, adherence to stipulations of mining legislations, as well as the continuing future planning towards closure and mine rehabilitation. All data and certifications, training schedules and
1st. Active Reassurances, ImpactandResolutions Acknowledgement and assessment of environmental
aggressive strategies - optimization of performance
risks, immediate challenges-remediation due to
- proactive responsibility - advanced certification -
previous ownership and suspension of activity -
reinforcement of Environment Department outreach
troubleshooting measures-adaptations to plan -
- research and development of global trends-
current certifications in hand-community relations
department training and awareness - rehabilitation
and education - workforce environmental awareness
projects and execution - monitoring matrix additions
training - mine planning for environmental protection
- rehabilitation projects and further planning -
anticipating predictability and control - water management - tailings containment - energy efficiency
3rd.	Future Developments, Decommissioning
- atmospheric (non-dust) emissions - dust control
and Post Mine Management
noise - vibration and blast control - hazardous
Landform design for remediation, rehabilitation and
materials management - storage and disposal
revegetation projects - Ministry of Forestry, Mining
management - managing sulphidic mine waste
and acid drainage - environmental monitoring and
Provisions, coordination and performance of public
performance - environmental auditing contaminated
environmental involvement-post remediation follow-
sites (SGS ISO certification standards)
through, community consultation and involvement,
cleaner production - mine decommissioning 2nd.	Next Actions of Responsibility Planning in progress - adaptations due to results
MYTCL has record compilations to indicate not
- evaluation of current Environmental Impact
only the adherence to legislative requirements and
Statements (EIS), Environmental Impact Assessments
defined environmental best practices, but also shows
(EIA) and Environmental Management Plans (EMP),
forward thinking ecological necessities through
critical path definition of end of mine closure -
proactive measures and institutions to bind with the global interests in sustaining our future environment.
Taking Care of Our Greatest Asset. . .
Safety Performance Since April 22, 2003, an Occupational Health &
operational activities. Task - list development, job -
Safety Management System (OHSMS) based on
safety analysis and risk assessment are performed
the AS/NZS 4801:2001 standard was introduced at
withinateam-based environment.
S&K project and replaced with OHSAS 18001:2007
The Departmental Management Plan (DMP) for each
standard on 25th July 2012. This implementation
department are also continually reviewed and revised
effectively assists in International and National
to comply with the latest developments within each
legal requirements, while committed to sustained
improvement in OHS performance.
Personnel involved in operations must be competent
to perform tasks that may impact occupational health
occupational health and safety risks associated
and safety in the workplace. MYTCL has therefore
with MYTCLâ&#x20AC;&#x2122;s activities are constantly reduced and
effectively managed. MYTCL believes that all injuries
schemes to ensure that all personnel have the
and occupational illnesses are preventable and
necessary capabilities and skills to perform their
places heavy emphasis on hazard identification,
risk assessment and hazard control. Procedures
Health and safety competency assessments, including
for Hazard Identification and Risk Assessment
identification of hazards, risk assessments, and the
(HIRA) were developed and implemented based
elements of operational control and emergency
on the AS-4360 standard. Risks are evaluated
response are conducted with each employee to
and registered within each department, as well
ensure that health and safety risks are controlled to
as for the entire operation. Identified risks have
prevent harm from occurring.
been controlled throughapreferred order of
Although the MYTCL, on whole, did not have a
control methods commonly referred to as a
perfect safety performance record for 2012, some
hierarchy. Safety objectives and targets have been
departments achieved over 5,100 LTI free days with
established, based on the risk ranking, and detailed
over 4.8 million hours worked.
management programs for achieving those objectives
Contractors and temporary employees make up a
and targets also have been developed.
large portion of MYTCLâ&#x20AC;&#x2122;s workforce, especially in
Job Safety Analysis (JSA) is the primary risk
project activities. We recognize that the temporary
assessment and management technique used for all
operators and workers may be more at risk of injuring
themselves where they are unfamiliar with MYTCLâ&#x20AC;&#x2122;s operations, and are undertaking non-routine tasks. Therefore, much of our efforts in the next 12-months will be devoted to the establishment of safe work practices, focusing on contractors and temporary employees. A standard procedure was developed for incident reporting
reported and investigated with the aim of preventing recurrence within our organization. Incidents also are classified and analyzed for common trends.
Health Performance Y.I.C Medical Services has been providing medical service to S&K Project since July of 1999. Health care is given not only to staff but also to family members, to Mine Town High School, police and army personnel assigned to the mine-site, monks and subcontractors. MYTCL has also establishedaspecial service to visit more than 30 neighboring villages to assist in our Good Neighbors Program. The Mine-Site Clinic and the Mine Town Hospital are responsible for the medical needs of the Mine Town community, while Yangon Clinic of Y.I.C Medical Services takes care of our Yangon office staff.
Mine Town Hospital The 16 - bed Mine Town Hospital is staffed by3medical doctors, one dental surgeon,6nurses and6nurse-aids with plans of further expansion in the very near future. The hospital is equipped with an anesthesia machine, X-ray machine, semiautomatic blood analyzer, dental chair and dental X-ray equipment. The hospital offers treatment toawide range of people, including families of the workers for emergency care, immunizations and medical checks. Both outpatient and in-patient treatment are provided, as well as major and minor surgeries are performed. In addition, prenatal care for pregnant women, vaccination clinics for children under the age of one, as part of the Universal Child Immunization Program, and prevention and control of blindness caused by Vitamin A deficiency are regularly completed.
Medical Services in Yangon Y.I.C. Medical Services in Yangon provides free medical health care to office staff of Yangon office. Pre-employment
checks, medical consultations and medicines and laboratory tests, excluding specialist consultations and hospital care, are also provided.
Creating Jobs for the Impoverished
For many of the local people, higher education is
MYTCL’s training period has evolved over the past
simply notapossibility. At MYTCL we recognize this
decade, and now institutesatraining duration
fact, and have therefore devised training programs
consisting ofafull 24-month program, including
and on the job training to allow for our Myanmar
12-months of theory and 12 - months on the job.
Nationals to receive free knowledge to enhance their
New trade trainees are educated in common subjects
abilities to succeed in our modern world. For the
of Safety and Environment, Computer Basics and
upcoming year of 2013, MYTCL has in the works an
the English language. Upon completion of this
intensive focus on educating individuals who wish to
network of skills each trade trainee team is placed
pursueacareer in the mining industry. Scholarships,
into educational niches regarding their respective
bursaries and in-house training will give locals the
professional subject of choice.
advantages of learning several vocations on site, as well as being supported for overseas educational
MYTCL is proud to announce that our Technical Training Program has nurtured 110 trainees who
Technical & Trade Training
are now assigned as qualified Tradespersons within
The S&K Technical & Trade Training Program began
the Mining, Process and Maintenance Departments.
in 2001, and now it is running the 8th session of this
The 34 Trainees of the program’s eighth session are
incredible, free program.
presently continuing with their courses. One Hundred
The objective of our Training Department is not only
and Forty-Four Trainees to date have participated in
to provide our trainees with basic knowledge, but also
with updated theories for practical skill needed in the work-site. MYTCL’s Training Programs and systems
have proven to produce well-skilled trade persons
Continuing in the spirit of internal development,
and to have assisted employees with technical
MYTCL has programs in action for existing employees
subject courses at high-quality world standard levels.
in English Proficiency and Computer Courses, and
So well in fact, that many have taken professional
also provides trade specific training courses in areas
employment outside of our company and now work
such as maintenance for employee advancement
with international institutions.
opportunities. A total of nine classes have been opened in 2011-2012.
Safety and Environment Training In keeping with our current international status
committed to providing in-depth and comprehensive
training programs to assist each and every employee
technologies expected to improve efficiency and
in maximizing their own potential, all the while
safety, as well as to reduce costs and environmental
developing alongside the international communities.
impacts are actively sought out and implemented
Safety and Environment learning, in every area of
through departments such as the Safety and
operations, isaceaseless array of refresher courses
Environment Research Department and from the
and of attaining modern knowledge.
Operations Management level. MYTCL is fully
1st Phase Theory
1st Phase OJT
2nd Phase Theory
2nd Phase OJT
3rd Phase Theory
3rd Phase OJT
Environmental Management System The Environmental Management System (EMS), integrated into Operational Management by the
•	Detailed Environmental Control Procedures have been develope and implemented.
S&K Project, records and monitors compliance with
•	An Environmental Emergency Response Plan has
stated environmental policies and objectives. This
been established, practiced and basic training is
compliance has been demonstrated through MYTCL’s
given to employees of all departments.
Société Générale de Surveillance (SGS) certifications. The current EMS requires MYTCL to continue to establish environmental planning and to continuously monitor the environmental impact of the operations.
conducted for new MYTCL projects. •	A
developed and environmental awareness training is ongoing on and off site.
effectively to any environmental impacts.
1.	Acid Rock Drainage (possibly released from mine-pit walls and waste dumps) 2.	Dangerous
•	All employees are trained to respond quickly and
•	All environmental documents are of high quality. Records are well stored, maintained and are
sulphuric acid and process reagents waste)
easily accessible. Documents are reviewed and updated to ensure continuous improvement.
3.	Land Disturbance (land disturbed by extensive
operations) 4.	Non-Process paper
In order to maintain the status asaworld-class mine,
the S&K Project has monitored the effectiveness of its Environmental Management System by having its
•	An Environment Management Program has been
performance audited regularly. The SGS auditors from
developed to control the environmental issues
Singapore conduct an audit of the MYTCL operations
identified above. The program is being actively
for certification in the ISO 14001 and the ISO 9001
monitored for potential environmental impacts.
in the middle, and at the end of each year. The SGS
•	Results are reviewed for any trends, findings
Certification Audit for OHSAS 18001 began in July
are reported and corrective measures are
of 2012. Internal audit teams formed with MYTCL
implemented, if required.
personnel, and professionally certified for auditing
Incidents Environmental incident reporting is required to
changes to the Aquifer and groundwater to date
identify areas for improvement and to track progress
are recorded. The incident has been identified as
on the treatment of an area following an incident.
a very rare event, nonetheless precautionary
In 2012 there was only 1 incident of environmental
measures have been implemented by Operations
concern and consequence.
should such an event reoccur.
Followinga6.5 earthquake recorded on the Richter Scale, and 10 minor quakes withinafew days period,
the foundation earth beneath the NE Waste Dump
MYTCLâ&#x20AC;&#x2122;s leased area totals 2,300 hectare, and is
failed, and unexpectedly collapsed. Operations
comprised of vegetated land, hills and ancient pits
Management andateam of investigators from the
left by previous mining activities. Mining operations
renowned Knight PiĂŠsold Australian consultancy
and the processing of ores have inevitably change the
company determined through scientific means that
natural landscapes. MYTCL assumes the responsibility
the failure was due to what is called Punching Sheer.
to minimize land disturbance and to rehabilitate
The increased seismic activity activatedabelow-
ground shift and surface collapse, and the NE Waste
established and implementedarolling program of
Dump dropped and spilled out approximately 17
progressive rehabilitation and revegetation within
meters towards the East. Due to sound stability
the lease, which has made excellent progress and
engineering, well-defined geotechnical surveys and
continues in effect.
data collection prior to waste dump creation, this
To control land disturbance on the S&K Project, a
incident was contained through mining methodology.
permit system is used to ensure personnel and
Had MYTCL not adhered to proper mining and waste
departments understand that the areas to be
dumping procedures, the waste dump may have slide
disturbed shall have minimal environmental impacts.
affected. Since 2001 the company has
out into the neighboring villages hundreds of meters. Immediate actions were taken, the groundwater and
Impacted Site Management
Aquifers monitored, and containment successful.
In 2012, 9-sites have been recorded as disturbed and
Consequently there was no damage with the
as either contaminated, impacted or affected. These
exception of one Secondary Miner hut pushed along
locations will be closed as part of the Mine Closure
the tailings from its base. No
Plan, which will rehabilitate all MYTCL sites detected
to date. The old Flotation Plant and limestone waste
annual rehabilitation program. This ensures that the
stockpile are among several sites used by previous
amount of disturbed area is kept toaminimum at
mining operations and listed as contaminated. MYTCL
all times. The rehabilitation program has achieved
is not responsible for remediation of any pre-existing
excellent results. A total of 363 hectares have been
sites. Sabetaung Pit, Sabetaung South Pit and the
rehabilitated since 1999. The goal of the 2012 plan
heap-leach pads are disturbed sites that remain
was to plant 10,000 trees in 9.1 hectares. In fact,
in operation. Additionally, 9-sites previously listed
approximately 11,000 trees were planted and 10
as disturbed have been closed and rehabilitated.
hectares were rehabilitated in 2012. This included
MYTCL’s Environmental Site Management Program
9.0 hectares in rehabilitation blocks West of the foot-
monitored by Operations references standards set
ball grounds and middle South of Mine Town where
by the National Environment Protection Council of
10,000 trees were planted and 1.0 hectare at the
side slope of Sabetaung Waste Dump Site near New Dondaw Village with 1,000 trees planted and 1.0
Rehabilitation and Revegetation
hectare of assorted native seeds scattered at the
MYTCL is responsible for restoring the natural
various areas disturbed by MYTCL activities. In 2013
landscape and for rehabilitating the area during
the S&K Project plans to rehabilitate 27.3 hectares
and after mining operations. Minimization of land
of disturbed land by planting 30,000 trees, and also
disturbances and progressive rehabilitation has been
1,000 assorted native trees.
carried out in the following areas of the mine site: •	Land disturbed by previous mining activities.
•	Decommissioned areas.
The MYTCL S&K Project is located inadry-zone area
•	Tailings-spills reclaimed area from previous
withahigh rate of evaporation and medium levels of
rainfall. The few surface-water bodies that exist in
•	Abandoned waste dumps from previous mining.
the project area are summarized as follows:
•	Areas where no future mining activities are
Wetlands: An environmental control of fresh water
run-off during the rainy season which maintains a
The company has developedarolling three-year
natural wetland ecosystem.
rehabilitation plan to re-vegetate areas disturbed
Ponds: A series of constructed control ponds to collect
by previous mining activities and areas where no
contaminated run-off from active operating areas.
future mining activities are expected. The three-
Process solution collection ponds are monitored to
year work plan is carried out through MYTCL’s
prevent contamination to the surroundings, such as
the Chindwin River or the Yama Stream.
system, particularly during the dry months. The heaviest dust-fall was recorded in the area nearby
the Primary and Secondary Crushers. Point DM-4
A shallow, semi-unconfined aquifer lies beneath the
(East of Primary Crusher) recorded the highest
mining operations area of the S&K Project.
dust-fall during March and April. The dust-fall at the
The water level of this aquifer varies with the wet
remaining spots indicates acceptable amounts in all
and dry seasons. MYTCL has installed 60 boreholes
seasons. Elevated dust fall levels were also apparent
around the S&K Project to monitor the groundwater
in areas adjacent to the access roads and Haul Roads
quality. Ground water is observed 10-meters below
in the dry seasons.
the surface in boreholes. Excess aquifer fresh water from the mine pit is pumped out intoasilt trap
pond and then released into the Yama Stream. An
The processes of Copper Heap Leaching and Electro-
independent laboratory is employed to analyze and
winning emit acid mist into the atmosphere. Acid-mist
check the samples.
emissions are monitored monthly around the heaps, and daily within the tank-houses of the SX-EW plant.
Dust Emission Controls
Results show that acid-mist levels are well below
Mining operations generate dust on roads and in
the allowable exposure levels, and this is measured
crushing, conveying and stacking areas. MYTCL
directly inside the area.
operatesadust-separation technology by the
A recent study was conducted due to complaints from a
spraying of water to control dust rising up from the
nearby monastery, and acid mist levels were monitored
mine pits, primary crusher, crushed-ore stockpiles
within the monastery. This study of tank house and heap
and Haul Roads. Thirty-one dust-monitoring stations
genereated acid mist spreading to the surrounding
are installed in major dust-emitting areas, and
area did not show any measurable presence.
recorded levels are reviewed monthly. Grass cover and re-vegetation is employed on exposed soil
around the mine site. Results have been variable
MYTCL uses various kinds of products, reagents and
because dust is caused by different sources, and
explosives in its production processes. Some are
different locations and results are mostly seasonal.
hazardous substances and control procedures have
For comparison, results at 31 spots indicate that
been developed and implemented to minimize the
dust-fall trends to lessen in the rain season. The main
risk of handling such materials. These substances
source of dust is the ore crushing and conveying
may cause injuries or health problems if their use is
not controlled. MYTCL has trained all personnel and issued HAZMAT guidelines for handling and storing of Dangerous Goods.
Acid Rock Drainage (ARD) Mining operations produces, in addition to inert waste, potential acid-forming waste containing oxidized or Sulphidic minerals that are capable of producing an acid contaminant (ARD material) when exposed to air and water. MYTCL is committed toaZero Discharge Policy, and maintains control over acid rock drainage as per the ARD Management Plan. Waste dumps are designed and constructed with clay lining and inert material on the sill, then encapsulated or â&#x20AC;&#x2DC;bundedâ&#x20AC;&#x2122; with clay and inert material around the dumps to prevent from ground contamination. Potential seepage water from the waste dumps will be collected and contained in interception drains dug along the toe of the waste dumps, and pumped back to containment ponds. Contaminated water from the pit is pumped into the Overflow Pond, while run-off released from the process leach pad areas is contained in the Storm-Water Pond and any excessive water is then pumped into the Tailings Dam. All contaminated solution is recycled as make-up water for the process of irrigating the Heap Cells.
Tailings Reclamation Earlier mining activity that preceded the formation of
and environmental issues affiliated with MYTCL and the
MYTCL resulted in considerable spills of tailings over
S&K Project, as well as how to make an environmental
150 hectares of land East of the present operations
reduction of their own Carbon Footprint. The objective
area, where artisanal miners recover residual copper at
of this well-planned exercise is to make all of our
subsistence levels. Most of this area is under the control
neighbors aware of the care for the environment that
of the local Myanmar Authorities. MYTCL assumed
we altogether must take, and that we at MYTCL are
responsibility to clear out the leftover tailings spills within
following internationally recognized and scientifically
the leased area to achieve its ISO 14001 Certification
proven measures to reduce, reuse, rehabilitate and
and honored its moral obligation to help clean up part
respect our environment. Every month through to
of the area outside the lease, when permitted to do
July of 2014,anew village has been scheduled for a
In 2006-2007, part of the affected area along
consultation from the S&E Department. During this visit,
the Kyaukmyet Road and in some lease areas was
our teams will discuss current or past issues and take
cleaned-up and reclaimed with local contract workers:
the time to test well-water and complete healthcare
old tailings were sent back to the Tailings Dam. Several
checkups on some of the inhabitants or newborns
requests were sent out to the Myanmar Government
from each village, listening to concerns and offering
in 2012 to allow MYTCL, at our own expense, to assist
assistance or advise for solutions.
in complete restoration of these lands. Although this is not MYTCLâ&#x20AC;&#x2122;s responsibility, we see the need to aid the people in recovering good farmlands and to cease the undesirable polluting of the groundwater, the Aquifer and of the self-inflicted poisoning that these activities produce.MYTCL is seeking full cooperation with local and National Authorities.
Village Education on Environmental Concerns The Safety and Environment Department is diligently working with local villages and their leadership to educate the people of our communities the safety
Worker Exposure Limit ASTM, AES : 1mg/m3 (260 ppb) y = -0.1677x2 + 5.4375x + 32.206 RÂ˛ = 0.0823 Alert Level (208 ppb)
H2SO4 Acid mist, PPB
12 20 5/ /2 12 10 /204/2 12 10 /203/2 12 10 /202/2 12 10 /20 1 /2 12 10 /207/1 12 10 /206/1 12 10 /206/2 12 10 /200/2 12 10 /209/1 12 10 /20 8 /1 12 10 /203/1210 201 / /9210 201 / /8210 201 / 2629/ 201 / 2529/ 201 / 2429/ 201 / 2329/ 201 / 2229/ 201 / 2129/ 201 / 2029/ 201 / 1929/ 201 / 1829/ 201 / 1729/ 201 / 1629/ 201 / 1429/ 201 / 1329/ 201 / 12 9/
Poly. (Max Concentration) Max Concentration
In 2012 Myanmar Yang Tse Copper Limited will
6.	Our company will set upaScholarship Program
spend approximately 70,000,000.00 FEC within the
for local outstanding students who cannot afford
country on local goods and services, and will employ
secondary Institutions due to their financial
by the end of 2013 approximately 1,700 employees.
situation. After completion of their course,
This year MYTCL & Myanmar Wanbao Mining
company will appoint them in their applicable
Copper Limited - MWMCL collectively have donated
trade and professionally work according to the
231,900.00 FEC and an additional 958,780,450 Kyats
degree or diploma achieved, if they are willing to
to local communities for assistance.
work within our mines.
In addition to monetary assistance, MYTCL and
7.	Donations of basic household foodstuffs such as
MWMCL will help onamore personal level by
rice, oil and salt, etc. will be provided to relocated
villages on occasion.
1.	Free of charge Medical Care will be provided to all local villages. 2.	A Scholarship Program and other educational
8.	Our company will provide the means to obtain drinking water and domestic water for local villages.
donations will be contributed to nearby villages of Myanmar Yang Tse Copper Limited and Myanmar Wanbao Mining Copper Limited. 3.	Creation of job opportunities and settingapriority to recruit those from relocated villages and who lost their farming land to our mine areas. 4.	For aged persons who are not able to work in our company and who have no other family members in relocated villages, the company will provide them with investment money to purchase domestic animals such chicken, cattle, sheep, goats and so on. 5.	Our company will establish one pre-primary school and one technical training school for the local community, where the local villagers can attend these schools free of charge.
Supporting Healthier Communities Under this program over 10,000 patients have been treated in 2012, andatotal of 28 villages. Within the Medical Care Program, there are3doctors,6nurses,5nurse aides and another3general helpers, totaling 17 members participating asamobile medical team. An Ambulance was also donated for emergency use for the local villagers. In addition to the monthly group health seminars held at the Mine Town State High School, the health care staff members travel to villages to hold educational talks at the local schools and villages eldersâ&#x20AC;&#x2122; homes. They work with government health officials during Clinic Days, they visit every pregnant woman, every sick child under the age of 5, providing all with individual health care and education. These doctors and aides visit schools and homes to inspect sanitation and personal hygiene practices. Toilets and drinking water supply is also inspected. Asapart of the Nutrition Promotion Program, staff has been monitoring the weight of children under the age of3since 2003. These healthcare activities have been both productive and beneficial to all of the communities. Helping children and adults in communities and around the Mine-Site is allowing people to live healthier and within higher-quality environments. MYTCL is always willing to extendahelping hand in making our worldabetter place.
Employee Organizational & Operational Development
agreement from the new MYTCL Upper Manage-
The previous employer, MICCL - Myanmar Ivanhoe
ment and Owners, recognized that it was time to
Copper Company Limited, was governed byaBoard of
make some drastic, yet advantageous change. At
Directors and limited to the number of employees and
the start of 2013 approximately 1,300 employees
positions that were available to the ‘average’ Myanmar
will have signed new contracts for employment that
person. Many positions in upper management were
will grant them permanent status until the age of 60
in fact taken by ex-ME1 employees or those from
with full benefits.
other government areas. At full strength the company
Another 300 Casual Laborers will also be employed
held 845 approved employment positions, with
at MYTCL on and off during the course of the next
an additional 100 employees permitted as Casual
year. This number is expected to double with the
Laborers. Many people were displaced and holding
construction planning that is in progress.
positions from departments that were not their own,
The Organization Charts were reorganized, people
simply for the fact of gaining salary, and therefore
placed back where they belonged, and those who
true department fulfillment was not achievable.
had worked for many years in Casual Laborer
positions without receiving salary increases or a
of MYTCL tookagood look at the structure of the
change of position were able to apply for better jobs,
internal workings of the company, and with full
and much better income. Casual Laborers who had
MYTCL 2013 - 2014
worked up to 15-years in their positions were granted
employees, Casual - Contract -Permanent, but also
permanent status with benefits, and people were
to allow those with this disease to work on site was
finally recognized and rewarded for their dedication
carefully reviewed. A new policy was created that
and work performances as they should be.
tested all employees and vaccinated all negative
Uniforms were redesigned, color brought back into
persons, allowing forasafe and protected work
the dull-trodden company andaspark of future hope
glistened in the eyes of these long-term Miners. Many
All persons were also tested for HIV. Those who
thought that suchachange was not possibleâ&#x20AC;Ś
test positive are consulted by the MYTCL doctors in
The growth that has begun will not cease through
confidence, and close family are invited to come in to
the coming years, but step by step, and milestone by
be tested for no cost and also taught how to live with
milestone MYTCL will encourage, reward and share
this incurable disease.
the benefits of success with our employees.
60+ Retirement Policy Policies for the People
There had been no clear definition of how employment
To unify the company, and to empower the people
would continue for most people over the age of 60
who had some hesitations of the new ownership, a
still fit for work.
Remuneration Committee was established, gathering
MYTCL has devisedaspecial policy to allow valuable
togetheragroup of persons to represent each
employees to be contracted as Consultants after the
portion of the Mine Management. This Committee
mandatory retirement age of 60, up and until the
would become the driving force behind making solid
changes to the company, and approving any and all
For higher management levels, and for persons
internal personnel growth and reward.
Policies were established with the leadership of Upper
Management, and new beginnings with equality for
All +60 persons are either recommended by their
all began to be placed down in writing.
superior, or on their own accord to the Remuneration
Committee who ultimately makes the terms and
Hepatitis-B and HIV Policy
decisions of retired employment.
New employee must undergoapre-employment
A fair-level and consistent decision making team
medical test to obtain permanent status, and those
has allowed for employees to plan their futures, and
found to have Hepatitis-B were deemed as unfit for
to have an equal chance of continued work should
employment and not accepted to work. Focusing
there be any differences between the employee and
on the need for not only protection of all existing
their superior. 45
Employee Benefits Social Securtity: MYTCL supports the Social
MYTCL is proud to have been adopted into this ancient
Security Scheme for the emergency and special
network of friends, family and neighbors, and
medical care in such case as illness, sustaining injury
whenever possible joins in with the cultural
from work accidents, maternity and death.
celebrations and festivals of the people and of the different religions of the area.
Mine Ownerâ&#x20AC;&#x2122;s Liability: MYTCL complies with the
Engaging in donations to the community itself, or
Mine Ownerâ&#x20AC;&#x2122;s Liability (Insurance) to all permanent
directly to monks and monasteries for religious days,
and contract employees. In future years to come, all
MYTCL provides social welfare to many events during
employees will be insured according to law.
the course of the year, and also joins in with the fun. For employees and their families Sport Day Activities
Provident Fund: The Provident Fund has been
occur every year in December, there is an annual
established in order to gain retirement funding at
Water Festival,aFun Fair during Independence Day,
the end of MYTCL employeeâ&#x20AC;&#x2122;s careers. MYTCL and
as well as monthly religious days when holy traditions
each employee who voluntarily join this program
are respected and charities offered to the monks.
contribute 3% each of the employee salary to a
Along with these special events there also follow
special bank account for the Provident Fund. Upon
some regular activities to help make life easier within
retirement the employee is awarded the full sum of
Mine Town. Housing Allowance is provided to all
permanent employees, water purification centers are operated and maintained by MYTCL, road-works
and electrical work are completed, and security and
The S&K Community, the Villagers and the surrounding
general assistance to the entire Community in any
area of the MYTCL Mine-Site have become family over
crisis, or time of need is extended. Myanmar Yang
the course of the years, and although ownership has
Tse Copper Limited not only cares for the Community,
changed the Myanmar National people are the
we are honored to have becomeapart of it.
constant that has endured the ages.
A Strategic Framework After completion of the mining operations, or once
and water erosion, while turning the mining lease to a
a part of the project becomes no longer viable or
condition that allows for cultivation or productive land
profitable to operate, closing down, removing all
the operation elements and decommissioning of the
In order to stabilize the landscape the following
mine will take place. A Conceptual Mine Closure Plan
works will be completed.
has been established by Operations Management
All the drill holes and borrow pits located within
and will be the basis for the development of a
the lease area will be filled, rehabilitated or
continuing closure plan that will take into account
redefined, and contained.
both the legal requirements, as well as the unique
•	Waste rock dumps and exhausted leached heaps
environmental, economic and social properties of the
will be battered down and capped with sands or
operations. This Conceptual Plan will take the form of
topsoil for rehabilitation with local plants.
an Integrated Mine Closure Plan at the conclusion of the construction, or establishment period estimated in 2014.
hydrocarbon fuel will be removed from mine site. •	All buildings and supporting facilities will be
MYTCL’s Mine Closure Planning will effectively keep
decommissioned and removed from the site and
four key objectives in mind during the life stages and
these areas will be rehabilitated.
closure stages of this project.
•	All the power supply lines above and underground
1.	To protect the environment and public health
not required for sustainability will be dismantled.
safety by using safe and responsible closing
•	All residual debris will be removed from the mine
practices. 2.	To reduce or eliminate environmental effects once the mine ceases operations.
site. This closure plan will cover Sabetaung, Sabetaung South & Kyisintaung mining operation areas. The
3.	To establish topographic conditions that is
Integrated Mine Closure Plan will be modified and
consistent with the pre-determined end-land use
updated annually, as well as with ongoing available
data and monitoring results.
4.	To reduce the need for long-term monitoring and maintenance by establishing effective physical
MYTCL will maintainapresence on site for five years
and chemical stability of disturbed areas.
following de-commissioning to assess the progress of
The Mine Closure Planning will focus on creating a
rehabilitation and re-vegetation, and to also ascertain
safe and stable landscape that is resistant to wind
the state of surface water runoff.
Environment, Occupational Health&Safety Myanmar Yang Tse Copper Company Limited- MYTCL maintains an Integrated Management System (IMS) to sustain Quality, Environmental and Occupational Health and Safety ethics, in-linewith International and Australian Standards. The IMS continues to be an established operational system for our Company, accomplished and continually updated for nearlyadecade through the support of the Management and Personnel of MYTCL. “This is to certify that an audit according to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 was conducted for Myanmar Yang Tse Copper Limited. As there was no Major Corrective Action Request raised during the course of audit, Myanmar Yang Tse Copper Limited is therefore recommended for registration to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 standards for the scope stipulated in the contract documents.“ SGS Singapore The SGS performance reviews are performed through the examination of records and supporting data held by MYTCL at the Monywa Mine-site, as well as at our offices in Yangon. Sampling for the reviews are comprehensive and performed in conjunction with interviews with the IMS Coordinator and personnel from the individual operational management areas. The reviewsconsistently show that the statements made in the reports have been substantiated. It is noted that there are clear Objectives and Targets for each Standard and the performance against these items is monitored onaregular basis. The data alsoshows that the Objectives and Targets are being met. MYTCL’s Environmental Control Procedures Manual continues to support the key Environmental Performance Indicators as set by our Company, and identifies that they are reliably below the levels set by the World Bank. The rehabilitation programs are in
acceleration with well-defined Mine
Closure Planning and haveshown to be successful through site monitoring, as well as strong management of ARD issues. The commissioning of this International assessment isavoluntary move by MYTCL and represents the levels of Corporate Responsibility and Environmental Stewardship we hold ourselves to. As leaders in our industry we will continue to indorseSocial and Environmental Developmentthrough the lifespan of the MYTCL Projects and to establish future sustainability once mining operations are concluded.
Knight Piésold Pty Limited was significantly involved with the Sabetaung & Kyisintaung Project from 1996 until 2005. Geotechnical consulting services were provided to the S&K Project by both Knight Piésold’s Head Office in Perth, West Australia and by our branch office in Singapore. Knight Piésold’s role as Geotechnical Consultant held responsibility for geotechnical site investigations, and then subsequent design and construction of all heap leach pads, associated solution and storm water ponds, tailings dam and open-pit geotechnical advice and implementation for the two pits. Knight Piésold also carried out the feasibility investigation and design for the Letpadaung Project. This work was comprised of investigation and design for the heap leach pads, solution ponds, open-pit dewatering pond, and recommendations on waste dump design and acid sludge dam design. During our period of working on site we are happy to be able to state that during all construction work, the various S&K departments, and personnel involved with these departments assisted us to the utmost degree in our endeavors to construct to, and comply with QA /QC procedures, as well as to work to Knight Piésold’s company standards asaconsultancy of international repute. Inevitably, as the construction work progressed certain geotechnical and topographic conditions on site were found to be adverse to certain aspects of our designs, and therefore we were required to implementadegree of field engineering to achieve Knight Piésold’s requirements. During such periods we were given willing and very able assistance from S&K personnel and management. In addition, we are very proud to state that we were able to provide guidance and training to many S&K personnel in the fields of geo-membrane liner subgrade construction and QA /QC testing, liner deployment and welding methods, and QA/ QC testing to international standards. Although Knight Piésold hadalimited role in environmental work, we did assist S&K personnel in their quest to apply international standards to their intensive water quality monitoring work.
In summary, Knight Piésold has been more than pleased to assist the Sabetaung & Kyisintaung project in the past; we commend them on their care for the environment and look forward to repeating our role with them continuing into the future.
Senior Geotechnical Engineer KNIGHT PIÉSOLD PTY LTD SINGAPORE 51
Inside this Edition Message from the Chairman ...................................................................................................................................... 56 A Word from the General Manager .......................................................................................................................... 57 Mission Statement, Code of Ethics & Environmental Policy...........................................................................59 International Certifications ....................................................................................................................................... 64 An Introduction of Sabetaung & Kyisintaung Operations	About MYTCL ............................................................................................................................................................66 S.H.E. Report .................................................................................................................................................,....................68 Safety, Occupational Health & Environmental Management .............................................,.....................70 Taking Care of our Greatest Asset – Our People
Safety Performance ..........................................................................................................................................74
Health Performance ........................................................................................................................................75
Mine Site Clinic ..................................................................................................................................................75
Mine Town Hospital ........................................................................................................................................76
Medical Services in Yangon.............................................................................................................................76
Creating Jobs for the Impoverished..............................................................................................................79
Technical & Trades Training ...........................................................................................................................79
Safety and Environmental Training............................................................................................................79
Environmental Management Systems........................................................................................................84
Earth, Wind and Acid Impact Management................................................................................................88
Containing Hazardous Materials....................................................................................................................88
Village Education on Environmental Concerns .....................................................................................90
Community Support initiatives ................................................................................................................................. 93 New Projects
Employee Organizational & Operational Development ....................................................................96
Policies for the People-...................................................................................................................................97
Mine Closure Planning.................................................................................................................................100
SGS - Société Générale de Surveillance..................................................................................................102
Knight Piésold Consulting .........................................................................................................................103 55
မုံရွာကြေးနီစီမံကိန်းအပေါ် MYTCL သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍတွင် ဒေသခံများ၊ ဒေသအာဏာပိုင် အဆင့်ဆင့်တို့ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အများဆန္ဒခံယူခြင်း၊ အချင်းချင်းသဘောထားအမြင်ဖလှယ်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံ ခန့်ခွဲမှု ပေါ်လစီဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အညီ တည်ဆောက်အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခြင်းတို့သည် အဓိကအရေးပါသော အချက်အဖြစ် ခံယူပါသည်။
ထိန်းသိမ်းနိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် စီးပွားရေးကို အချိုးညီစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချိုးညီစွာ တိုးတက်လာစေရန် အနာဂတ်တွင်ဖြစ်လာမည့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုကို ကောင်းစွာကိုင်တွယ် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။
သတ္တုတွင်းထွက် အရင်းအမြစ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံတော် စီးပွားရေးတွင် အချက်ချာကျသောနေရာမှ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့်အလုပ် အကိုင်နေရာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၊ အစိုးရအခွန်ငွေ တိုးတက်ရရှိခြင်းနှင့် စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းများအတွက် အဓိကကျသော အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပါသည်။ ၄င်းရရှိဖြစ်ထွန်းလာသည့် အကျိုးရလာဘ်များကို အခြေခံလျက် အတွေ့အကြုံများ ကိုသင်ခန်းစာယူပြီး တိကျ ခိုင်မာသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ကြရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
MYTCL သည် (၁ဝ)နှစ်တာကာလအတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အစီအစဉ်များ၏ အောင်မြင်မှုကို မှတ်ကျောက်အဖြစ် စံထားပြီး ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်သော စီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ်များအတွက် သဘာဝအရည်အသွေးများ တိုးတက်မြင့်မားစေလျက် ဒေသခံများနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု၍ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာများကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
MYTCL ၏ ဥက္ကဌနှင့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးအနေဖြင့် သင်တို့အားလုံးနှင့် အတူတကွ လက်တွဲညီစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ကြခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ဆီ သို့ ချီတက်လှမ်းကြပါစို့။
ဥက္ကဌ နှင့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
မိတ်ဆွေများ မိသားစုဝင်များ ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ နှင့် ဝေဖန်အကြံပြုသူများခင်ဗျားကျွန်တော် အနေဖြင့် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာဗျူဟာ အစီရင်ခံစာနှင့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာ များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်မှုတို့ဖြင့် ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါသည်။
ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ထားသည်မှာ - လူများသည် မိမိစွမ်းအား၏ ၇၅% ကို ထုတ်ဖော်သုံးစွဲနိုင်ကြခြင်းဖြစ်၍ စက်မှုလုပ်ငန်းမည်မျှပင် ပြည့်စုံ သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ စီမံခန့်ခွဲရေးပိုင်းအနေဖြင့် ကြီးမားသော အမြော်အမြင်များ ပြောင်မြောက်သော စီမံကိန်းများ ချမှတ်စေကာမူ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သူများ၏ စွမ်းအား မပါဝင်ဘဲ အကျိုးရလာဘ် မရရှိနိုင်ပါ။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ တစ်ဦးချင်းစီ အနေဖြင့် မိမိ၏ စွမ်းဆောင်ရည် အမြင့်မားဆုံး ကြိုးစား၍ လုံ့လ၊ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ စက်ရုံလုပ်ငန်း၌ လူကောင်းများကို ခန့်ထားရုံသက်သက်ဖြင့် မလုံလောက်သေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများအတွက် လိုအပ်သည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဆောင်ရွက်သူများ၏ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု နှင့်အောင်မြင်မှုများအတွက် ချီးမြှောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အရေးအကြီးဆုံး ကိရိယာတန်ဆာပလာ လိုအပ်ချက်မှာ ဗဟုသုတဖြစ်ပါသည်။ မိမိဝန်းကျင်ရှိ နေရာ ဒေသ အကြောင်း သိရှိရမည့် ဗဟုသုတဖြစ်ပါသည်။
ကြေးနီသတ္တုစင် ထုတ်လုပ်သည့်ဒေသ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်
ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရန် လုပ်ဆောင်ရမည့် ဗဟုသုတများ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာမြေအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပျိုးထောင်ပေးခြင်း လုပ်ငန်း ဗဟုသုတများလည်း ရှိရပါမည်။ သို့မှသာ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း တစ်ရပ်အနေဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်မှုများအား လျော့ကျသွားရန် မလွဲမသွေ လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ထားသည်မှာ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်၍ တိုးတက်မှု အပြုသဘောဆောင်သော ဖြစ်ထွန်းမှုများ ရရှိရမည်ဖြစ်သည်။ MYTCL ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် စုစည်းညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်၍ မဟာဗျူဟာများကို အကောင် အထည်ဖော်ဆောင် ကြခြင်းဖြင့် အောင်မြင်သော အနာဂတ်များကို ရောက်ရှိကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် သင်တို့အပေါ်၌ အားထားယုံကြည်မှု အပြည့်အဝရှိ၍ ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိကြပြီး ထင်ရှားပေါ်လွင်သော ကုမ္ပဏီအဖြစ် ရောက်ရှိအောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် လာမည့်နှစ်အား အောင်မြင်ပြီး ပြည့်စုံသော နှစ်တစ်နှစ်အဖြစ် ရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါစို့ ။
အထွေထွေမန်နေဂျာ - MYTCL 57
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ အထူးတာဝန်
MYTCL – Myanmar Yang Tse Copper Limited သည် ဒေသခံ သတ္တုတူးဖော်ရေး အဖွဲ့ အစည်း၏ လုပ်အားဖြင့် ထွက်ရှိလာသော ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းများ ရရှိစေရန်အတွက် အဓိကကျသော တန်ဖိုး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထောပနာပြုမှုနှင့်ဘဏ္ဍာရေးတည်ငြိမ်မှုများ ဖန်တီးပေး ရန် စိတ်ကူး စိတ်သန်း တစ်ခုကို ချမှတ် တည်ဆောက်ထား ပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် MYTCL ၏ ဝန်ထမ်းတိုင်း အောင်မြင်ရမည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့် ဆိုပါသည်။ အကြောင်းမူကား ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီး မားသော အဖွဲ့အစည်းကြီး၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး၊ အောင်မြင်မှု ရရှိ အောင်ေ ဆာင် ရွ က် ရခြင်း သည် အ ဖွဲ့  ၏ အဓိ က တာဝန်ြ ဖစ် ပါသည် ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ခံမှုသည် သိသာ မြင်သာရှိ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေသန္တရနှင့် အမျိုးသားဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် လု ပ် ကို င် လျက် ရှိြ ပီး ထိ ခို က် မှု များကို အလေးထားစဉ်း စားဆောင် ရွက် ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အထူးတာဝန်ဖြင့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး စီးပွားရေး အ ခွင့်အလမ်းကိုမျှတစွာဖော်ဆောင်ပေးပါသည်။ ဘေးအန္တရာယ်ကင်း စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ထိခိုက်မှုများ ကိုလည်း အလေးထားစဉ်းစားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ - သတ္တုတူးဖော်ရေး စီမံကိန်း များ၌ လူမှုရေးရာ၊ အပင်နှင့်သတ္တဝါ ဆက်နွယ်မှုရေးရာ၊ ပတ်ဝန်း ကျင် ထိန်းသိမ်းမှုရေးရာ ရှုထောင့်များ တာရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲမှုများ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရိပ်အာဝါသ အောက်၌ ခိုလှုံနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံ နှုန်းများ နှင့် ညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင် ကြရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ပန်းတိုင်မှာသက်ဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်း လောက၌ ခေါင်းဆောင်ကောင်းအဖြစ် ဦးဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန်နှင့် ပတ်ဝန်း ကျင်ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် မြင့်မားသော ရလာဘ်များရရှိရန် ပြည် ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသားများသို့ ကျွမ်းကျင်မှု အကူအညီ အစီအမံဖြင့် သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကတန်ဖိုးမှာကျွန်ုပ်တို့ဘယ်သူတွေ ဘာကို ယုံကြည် သလဲဟူသော အကြောင်းကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ရန် ဖြစ်ပါသည်။
MYTCL၏ အဓိကထားမှုမှာ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်သမျှ အားလုံးပင် ဖြစ်ပါ သည်။ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွင် ဤအဓိက တန်ဖိုးများကို အခြေခံ အရင်း တည်လျက် ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ် ပေါင်းစပ် ဖော်ဆောင် လုပ် ဆောင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်တိုက်အောင်မြင်မှု သော့ချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ •
အရည်အသွေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် လုံးဝ ထိခိုက်မခံနိုင်သော ကတိက ဝတ်ပြုခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပွင့်လင်းစွာ ဆက်ဆံပေါင်းသင်းခြင်း၊
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ယုံကြည်မှု လေးစားမှု နှင့် အောင်မြင်မှုများဖြင့် ဆက်ဆံ ခြင်း၊
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ၊ တာဝန်ခံမှု ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ တာဝန်သိသော ခေါင်းဆောင် များဖြင့် စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း တည်ထောင်ခြင်း၊
စွန့်စားဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းများတွင် နိုးကြား သတိရှိခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆောင်ရွက်မှုအားလုံး ဂုဏ်သိက္ခာရှိခြင်း၊
ဘဏ္ဍာရေး အာမခံနိုင်မှု၊ အစုရှယ်ယာရှင် အပေါ်တွင် အာမခံ တာဝန် ယူနိုင်မှု။
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့် ခွဲမှု မူဝါဒများ
MYTCL သည်အရင်းအမြစ်များကို လုပ်ငန်းစီမံချက်ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲ
ဂရုပြုကြရန် လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးထာပါသည်။
မှုများ၊ ကျင့်ဝတ်ထုံးတမ်း နှင့်အညီဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရန်သန္နိဌာန်
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားရမည့် အနာဂတ်အတွက် လမ်း
ညွှန်အဖြစ် အဓိကပန်းတိုင်ကြီး (၃)ခုကို ချမှတ်ထားပါသည်။
မှုတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးအဖြစ် လူမှုရေးတာဝန်များကို နားလည်သ
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နစ်နာမှု
ဘောပေါက်စွာဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုကို ဦး
အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကို မညစ်
ဆောင်ဦးရွက်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစဉ်တစိုက် ကမ္ဘာ
နွမ်း အောင် ထိန်းချုပ်နိုင်သမျှစီမံဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရန်၊
အနှံ့ဖက်စပ်အဖွဲ့များ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ သွင်းအားစုပစ္စည်းပံ့ပိုး
တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် အညီ ညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်လျှက်
သူများ နှင့် ဆက်ဆံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ စီမံကိန်းများတွင် ထိန်းထား
လက်ရှိစက်မှုထုတ်ကုန် စံနှုန်းများ ထက်ကျော်လွန် ထွက်ရှိ
နိုင်သောလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုများ ရရှိဖြစ်ထွန်းရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ဝန်း
အောင် ဆောင် ရွက်ရန်၊
ကျင်အခြေခံကောင်းမွန်အောင် ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်လျက်ရှိပါ
အလေအလွင့်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို လျော့ပါးစေလျက် သ
သည်။ MYTCL ၏ မူလပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာပန်းတိုင် မှာကျွန်ုပ်တို့
ဘာဝ အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း၊ ပြန်လည်
ပျိုးထောင် ပေးခြင်းနှင့် နဂိုမူရင်းအတိုင်း ထိန်းသိမ်းသွားရန်၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ စီမံကိန်းများအနေဖြင့် ဤပန်းတိုင်များနှင့်အညီ ဆောင်
အခြေခံ ပြန်လည်ထူထောင်ဖြစ်ထွန်းရေးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့
ရွက်ရန်နှင့် ပြည်တွင်းမူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ကိုက်ညီ
မှုများ၊ အကဲဖြတ်တတ်မှုအစီအမံများနှင့် အညီလေ့ကျင့်သင်ကြား
ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသ မထိခိုက်မှု ၊
ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပန်းတိုင်သည်သိပ္ပံနည်းကျရည်မှန်းချက်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို ပြည့်မှီ (သို့ ) ကျော်လွန်အောင်
များကိုစဉ်ဆက်မပြတ် အမြဲရရှိအောင် ထာဝရသုံးသပ်မှုများဖြင့် ပြု
စွမ်းအားသုံးစွဲမှုတွင် ပြည့်စုံလုံလောက်မှုရှိရန် ၊
များကို ပြန်လည်သုံးစွဲရန် နှင့် ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ကိုစွန့်ပစ်ရန်၊ MYTCL၏ စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်သိက္ခာမှာ ဥပဒေသည် အလုပ်သ မား နှင့် ဝန်ထမ်းအားလုံးတို့အနေဖြင့် တရားဝင် ဥပဒေကြောင်းနှင့် အညီလက်ရှိ စက်မှုစံနှုန်းများနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ဆောင်ရွက်ကြရန်၊ အထူးသဖြင့် ညစ်ညမ်းမှု ကာကွယ်တားဆီးရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ကြရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန်ထမ်းများကိုပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာများ၌ မြင်ရှိကြရန်၊
ထုတ်ပြန်ချက်များကို သတိ ပြုလိုက်နာကြရန်၊ ထိုမျှသာမကပဲ ပတ် ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာများနှင့် လူအဖွဲ့အစည်းများကို အလေးထား
MYTCL သည် နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ ရရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ SGS- Société Générale de Surveillance အရ စာချုပ်စာတမ်း
ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ * ISO 14001 ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် * ISO 9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်
MYTCL သည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် ကြေးနီသတ္တုစင်၏ အရည်အသွေးကို LME Grade A အဆင့်မီအောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သလို ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး များကို အစဉ်တိုးတက် အောင်မြင်နေစေရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ် တလျှောက်
* OHSAS18001 လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်
လုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများ နှင့် အညီအကောင်းဆုံးထိန်းထားဆောင်
စံပယ်တောင် နှင့် ကြေးစင်တောင် လုပ်ငန်းများအား မိတ်ဆက်ပေးခြင်း
စံပယ်တောင်နှင့်ကြေးစင်တောင်(S&K) သတ္တုတွင်းသည် မုံရွာခရိုင်
ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ မဟာဗျူဟာ နည်းပညာဖြင့် ပြုစုထားမှုသည်
MYTCL မှ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဘေးကင်းမှု၊ ကျန်းမာမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
အနောက် ဘက်ကမ်းဒေသ၌ (၂ဝ) ရာစုနှစ်အစတွင် စတင်တည်
ထိခိုက်မှုများ မရှိအောင် ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်နေပြီး
ထောင်ခဲ့ပြီး၊ မုံရွာမြို့ မှ ကုန်းလမ်းခရီး (၄ဝ) မိနစ်ခန့်သွားရပါသည်။
ပြည်သူလူထုနှင့်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အနာဂတ်
ဒေသရင်း လူဦးရေမှာ ၅ဝဝ,ဝဝဝ ခန့် ရှိကြပါသည်။ သမအပူပိုင်း
ဒေသဖြစ်၍ တစ်နှစ်မိုးရေချိန် ၇ဝဝမီလီမီတာခန့်ရွာသွန်းပါသည်။
တောင်ကုန်း များပေါ်၌ ထန်းပင်များ၊ ချုံပုတ် ချုံတောများနှင့် ပြည့်
သက်ဆိုင်သူ မည်သူမဆို ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်၍
ဝေဖန်အကြံ ပြုနိုင်ပါသည်။ MYTCLအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများ သာမက
ဤသတ္တုတွင်းကို နိုင်ငံတကာမှ ကုမ္ပဏီများစွာတို့ ပါဝင်ဆောင်
တိုးချဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းများကို ဆက်သွယ် အကြံပြုဝေဖန်ရန် တံခါး
ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စံပယ်တောင် နှင့် စံပယ်တောင် (တောင်)
ပိုင်းတွင်တူးဖော်မှု အစီအစဉ်ကို ၂ဝဝ၆ခုနှစ်တွင် သြစတြေးလျ ကုမ္ပဏီ GRD MINPROC ကဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကြေးစင်တောင် ဒီဇိုင်းပုံစံ ရေးဆွဲ၍ ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။ (S&K) ကြေးစင်တောင် နှင့် စံပယ်တောင် စီမံကိန်းကို ကမ္ဘာအဆင့်မီ လုပ်ငန်းကြီးများက အဆင့်ဆင့် ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ယင်းတို့မှာ Knight Piesol Pty.Limited, Coffee Partners International Pty Limited, The World Bank, Weste(Welsh Engineering Science & Technology
Engineers and Architects), Golder Associations and Ivanhoe တို့ဖြစ်ကြသည်။ ယခုအခါ စံပယ်တောင် နှင့် ကြေးစင်တောင်ကို Wanbao Mining Limited နှင့် Myanmar Yang Tse Copper Limited MYTCL အဖြစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ အကျိုး တူမျှဝေခံစားသည့် အခြေခံမူများဖြင့် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ ဖက်စပ် ဆောင်ရွက်နေသည်။ Wanbao Mining သည် ကမ္ဘာအနှံ့ သတ္တုရင်း မြစ်များမှ အရည်အသွေးမြင့် သတ္တုများ တူးဖော် ထုတ်လုပ်လျက် ရှိပါသည်။
ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ စီမံခန့် ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ
များ ပါဝင်သည့် မူဝါဒသည် တာရှည်တည်တံ့သည့် အရည်အသွေး မြင့်မားပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု၊ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေး၊ သ ဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရေးရာဆောင်ရွက်မှု စံနှုန်းများနှင့် ညီညွတ်မျှ တသော၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
နှင့်အညီ ဘေးကင်းလုံခြုံသော လုပ်ငန်းနှင့် အခြေအနေများကို ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းစစ်များ နှင့် ပြင်ပလုပ်ငန်းစစ်များ၏ စစ်ဆေး အတည် ပြုချက်များ ရရှိပြီး တိုးတက်မြင့်မားသည့် စီမံကိန်းအဖြစ် ရပ်တည် ဖော်ဆောင်နေပါသည်။ MYTCL ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများမှာ အောက်ပါတို့ ကို အမှီသဟဲပြု လုပ်ဆောင်ပါသည်။ •
SHE ( Safety, Occupational Health & Environmental ) ဆောင်ရွက်မှုအတွက်တာဝန်ယူမှု နှင့် အဆင့်လိုက် စီမံခန့်ခွဲမှု များ၊
SHEအစီအမံများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သေချာစွာ ဖော်ညွှန်းထားသော ပန်းတိုင်များ နှင့် ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်ခြင်းဖြင့်ဝန်ထမ်းများ သိရှိနားလည် သဘောပေါက်ကြစေခြင်း၊
ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ နှင့် ဝန်ထမ်းများကို လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးခြင်း ဖြင့်ဘေးအန္တ၇ာယ်များ၊ အဓိကထိခိုက်ဒဏ်ရာရ ခြင်း များကိုသိသာထင်ရှားစွာ သိမြင်နိုင်ပြီး စွန့်စားမှုကြောင့်ဖြစ်လာ မည့်အန္တရာယ်များလျှော့နည်းအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ၊
MYTCL၏ ဘေးကင်းမှုလုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရေး ရာစီမံဆောင်ရွက်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဦးဆောင်မှုသည်မယိမ်းမ ယိုင်တည့်မတ်စွာဦးတည်ဦးဆောင်နေပါသည်။ MYTCL၏ကတိပေ: ပြီးသောအလုပ်မှာ ရေရှည်တည်တံ့သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ် ရပ်ကိုတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်၍ လူမှုရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေး ရာတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ပြီး အစုရှယ်ယာဝင်များ အပေါ်တွင် ကောင်းမွန်သောအကျိုးရလာဘ်များရရှိပေါ်ထွန်းစေပါ သည်။
အပင် နှင့် သတ္တဝါ ဆက်နွယ်မှု၊ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရရှိစေမှု
MYTCLအနေဖြင့် ရေရှည် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု နှင့် ကာကွယ် မှုအစီအစဉ်များ အရ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကိုအသေးစိတ်အားဖြင့် MYTCL ၏စံပယ်တောင်နှင့်ကြေးစင် တောင်စီမံကိန်း ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ထုံးလုပ် နည်းလက်စွဲ(ECP)အဖြစ်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ(၁၄)ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမန်နေ ဂျာ နှင့် အထွေထွေမန်နေဂျာ တို့အတည်ပြုပြီးသည့် လက်စွဲ ကျမ်းသည် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာအဖွဲ့၏ အတည် ပြုချက်ဖြင့် ပြည်ထောင်စုရေးရာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အမွေအနှစ်ဌာန၏အစီအစဉ် ဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင် ရေးရာ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များ သည် MYTCL အနေဖြင့် လူနှင့် အပင်ပတ်ဝန်းကျင်သဘော ဆက်နွယ်မှုအရ အဓိ က(၃၆)နေရာတို့၌ပြန်လည်ထူထောင်မှု၊ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှု၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေးရာ ကိစ္စရပ် များကို အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အရေးပေါ်စီမံကိန်း အနေဖြင့် MYTCL မှ ကျွမ်း ကျင်သူ(၁၃) ဦးသည် အခန်းကဏ္ဍ အလိုက်အထူးပြု တိုးတက်ဖြစ် ထွန်းအောင် ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။ အကျဉ်းချုပ်သုံးသပ်ချက်(၃)ရပ် - အောက်ပါအချက်များသည်လက် ရှိဆောင်ရွက်ချက်များတွင် အကောင်းဆုံးသော လုပ်ဆောင်ချက် များဖြစ်ကြ၍ သတ္တုတူးဖေါ်ခြင်း ဥပဒေအရ စည်းကမ်းချက်များ နှင့် အညီ သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းရာတွင် သတ္တုတွင်း လုပ်ကွက်ဟောင်း များကိုသဘာဝပုံမှန်အဖြစ်သို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုပါဆောင် ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးသောအချက်အလက်၊ စာချုပ်စာတမ်း များ နှင့် အ နာဂတ် စီမံကိန်း ဖွံ့ဖြိုးမှုများအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ခြင်း ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုများကို ပြည်သူများ ကြည့်ရှုနိုင် အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
ပထမအဆင့်-လက်တွေ့အာမခံချက်များထိရောက်သောအကျိုး သက်ရောက်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ စွန့်စားမှုအန္တရာယ်များ နှင့် ရုတ်တရက်စိန်
ခေါ်မှုများအပေါ် အကဲဖြတ်လျက် ယင်းလုပ်ရပ်ကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းဖြင့်
ကမ္ဘာအနှံ့ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများဆီသို့ ဦးတည်သော သုတေ
ဖြေလျှော့ပေးစေခြင်း၊ ပြစ်ချက်များကိုဖြေဖျောက်ပေးခြင်း၊ စီမံကိန်း
သန ပြုလုပ်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဖော်
ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ လက်ရှိဖြေရှင်းချက်များ
ဆောင်ခြင်းနှင့် လျော်ကန်သင့်မြတ်သော တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှု
ဖြင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံခြင်း၊ အသိပညာ သင်ကြားပေး
များ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး အစီအမံများ
ခြင်း၊အလုပ်သမားထုအားလုံး ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ အသိစိတ်ရှိကြ
တိုးမြှင့်ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ပျက်ပေါ်ထွန်းမှုများနှင့်
သတ္တုတွင်းစီမံကိန်းကို ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
တတိယဆင့်အနေဖြင့်- အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်
စီမံကိန်းများ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နောက်ထပ် စီမံကိန်းရေး
ဆွဲခြင်း၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှုကိုမျှော်မှန်းခြင်း၊ သောက်
အစီအမံများ နှင့် သတ္တုတူးဖေါ်မှု ပြီးဆုံးရေး စီမံမှုများကို ဆောင်ရွက်
သုံးရေ ရရှိရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ပြုလုပ်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ
ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ပြည့်ဝမှု၊ လေထု၌ ထွက်ရှိသော အငွေ့အ
ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြန်လည်
မှုန့်များ အဆိပ်ကင်းစင်ခြင်း၊ အသံတုန်ခါမှုနှင့် ကျယ်လောင်မှု
စိမ်းလန်းစိုပြည်မှု ဆောင်ရက်ွပေးခြင်း၊ သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊
ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ရှိ ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ သို
သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနများ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ပူးပေါင်းဆောင်
လှောင်ခြင်း နှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း စနစ်ကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ရွက်ခြင်း၊ သတ္တုတူးဖေါ်မှုပြီးဆုံးခြင်း ပြဌာန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်
ကန့် ပါဝင်သည့်စွန့်ပစ်ဒြပ်ပစ္စည်း ပစ္စည်းများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
ခြင်း၊ ပြည်သူပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုများကို ဆောင်
အက်ဆစ်ငရဲမီးစွန့်ပစ် ပစ္စည်းများကို စီမံခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်
ရွက်ခြင်း၊ ပြီးဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်
စနစ်တကျ စွန့်ပစ် စီးဆင်းစေခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာစောင့်ကြပ်
ပေးခြင်း၊ ပြည်သူနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ပါဝင်ပတ်သက် ဆောင်ရွက်ပေး
ကြည့်ရှု သုံးသပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းသည့် နေရာများကို
ခြင်း၊ ပိုမိုသန့်ရှင်းသော ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ် ချမှတ်ဆောင်ရွက်
ခြင်း၊ သတ္တုတွင်းပြီးပိတ်သိမ်းမှု စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
MYTCLသည် ဥပဒေကြောင်းအရ လိုက်နာရန်ကိစ္စရပ်များကိုဆောင်
တိုးတက်ဆောင်ရွက်ရန် စီမံချက်များ၊ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ
ရွက်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာအားဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန် စီစဉ်
ထိစပ်မှု ဖော်ပြချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ထိခိုက်မှု တင်ပြ
ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ လိုအပ်မှုများကို ဖြည့်ဆည်း
ချက်များ၊ အကဲဖြတ်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှု စီမံကိန်း
ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သည့် အစီအမံများနှင့် ကမ္ဘာအနှံ့စိတ်
များကို သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းချိန်၌ ဆောင်ရွက်ဖွယ်ကိစ္စရပ်များအား
ဝင်စားလာမည့် တာရှည်တည်တံ့သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်
အတိမ်းအစောင်းမရှိ ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ တက်ကြွသော မဟာဗျူဟာ
များ၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်သော ထောက်ခံချက်များ ရရှိစေခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့ ၏တန်ဖိုးကြီး ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့ ၏လူများကို ဂရုစိုက်ခြင်း
ဘေးကင်းမှုဆောင်ရွက်ချက် ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၂) ရက်နေ့ ကတည်းက လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာ
အသင်းအဖွဲ့ အလိုက် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှု - လုပ်ငန်းခွင် ဘေးကင်းမှု စီ
ရေး နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်တစ်ခုကိုAS/NZ5-
စစ်ချက် နှင့် အရဲစွန့်မှု အကဲဖြတ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက် ရ
4801-2001 စံနှုန်း နှင့် အညီ S&K စီမံကိန်းတွင် စတင် အကောင်အ
ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီး ၂ဝ၁၂ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၂၅) ရက်နေ့တွင်
ဌာနတစ်ခုစီအတွက် ဌာနဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံချက်များကိုစဉ်ဆက်
OHSAS18001:2007 စံနှုန်းသို့ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။
မပြတ်ပဲ ယင်းဌာနအတွက် နောက်ဆုံး ဖွံ့ဖြိုးမှုများ နှင့် လိုက်လျော
ဤ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နှင့်
ညီထွေ ဖြစ်စေရန် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်များသည် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်
ကျန်းမာရေး နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ချက်အနေဖြင့် တာ
နေရာများ၌လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး အစီအမံများ
ရှည်တည်တံ့သည့် ဆောင်ရွက်မှု ဖြစ်ပါသည်။
ဖြင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် အရည်အချင်းပြည့်ဝ နေစေ ရပါ
လူပုဂ္ဂိုလ်သည် MYTCL၏ ကြီးမားသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်၍ လုပ်
မည်။ MYTCL အနေဖြင့် အားလုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် မိမိတို့၏
ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တ၇ာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ စွန့်စားမှု
ထိန်းချုပ်ရေးများနှင့်ဆက်စပ်သော MYTCL၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်
အလို့ငှာ ပညာပေးခြင်း၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း နှင့် သတိရှိ စွာ
ချက်များသည်ဘေးဥပါဒ်များလျှော့နည်းစေပါသည်။ MYTCL အနေ
ဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖွယ်ရှိကြစေရန် စီမံဆောင်ရွက် ထား
ဖြင့်ယုံကြည်ခံယူထားသည်မှာ အားလုံးသော ထိခိုက်မှုများနှင့် လုပ်
ကျန်းမာခြင်းနှင့် ဘေးကင်းမှု အရည်အချင်း ပြည့်စုံစွာရှိကြစေရန်
ခံယူပါသည်။ အထူးအားဖြင့် ဘေးအန္တရာယ် အခြေအနေကို ထုတ်
ဖော်ခြင်း၊ အရဲစွန့်မှု အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ထိန်းချုပ်ရေး
စွန့်မှု အကဲဖြတ်ခြင်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိန်းချုပ်မှု
နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် တုံ့ပြန်နိုင်မှုစွမ်းရည် တို့ရှိကြစေရန်
ဘေးအန္တရာယ် ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် အရဲစွန့်မှုအကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်း
အလုပ်သမားတိုင်းသို့ ဘေးအန္တရာယ်များ ကို ထိန်းချုပ် ကာကွယ်၍
ရပ်များကို AS-4360 စံနှုန်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
MYTCL အနေဖြင့်၂ဝ၁၂ ခုနှစ် အတွင်း အလုံးစုံ ပြီးပြည့်စုံသည့်
နှင့် မှတ်တမ်းများထားရှိသလို လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်လည်း
ဘေးကင်းမှု အစီအမံများကို မဆောင်ရွက်နိုင်သော်လည်း အချို့
မှတ်တမ်းထား ရှိပါသည်။ ခွဲခြားဖော်ထုတ်နိုင်သော အရဲစွန့်မှုများကို
အန္တရာယ်အတိမ်အနက် ထိန်းချုပ်မှုလမ်းစဉ်များနှင့် အညီထိန်းချုပ်
အလုပ်ချိန်ပေါင်း ၄.၈ သန်းကျော်အထိ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်
ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဘေးကင်းမှုပန်းတိုင်များနှင့် ရည်မှန်းချက်များကို
အတည်ပြုသတ်မှတ်ထားရှိပြီး အရဲစွန့်မှုအဆင့်အတန်း အလိုက်အ
MYTCL တွင် ကန်ထရိုက်တာများ ယာယီအလုပ်သမားများ အများ
ကိုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ခွင်ဘေးကင်းမှု စီ
ကြရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် ယာယီအလုပ် သမားများ
စစ်ချက်သည်အခြေခံအရဲစွန့်မှုအား အကဲဖြတ်ခြင်း နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု
ဘေးအန္တရာယ်များ နှင့် အရဲစွန့်မှုများကို ရင်ဆိုင်ကြ ရသည်ကို
နည်းပညာများဖြစ်၍ ယင်းကို လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံး၌ သုံးစွဲရန်ဖြစ်
MYTCL ၏ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝကို မကျွမ်းဝင် သောကြောင့်
ဖြစ်ရသည်ဟု မှတ်ယူပါသည်။ လုပ်ငန်း သဘာဝအဖြစ် သမားရိုးကျ
မဟုတ်သောကြောင့် သတိပြုဂရုစိုက်၍ ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်
အထူးသဖြင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာများ နှင့် အရေးပေါ် အခြေအနေများကို
ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှေ့ လာမည့် (၁၂)လ တာကာလ အတွင်း
ဝန်ဆောင်မှု ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ အသည်း ရောင်အသည်းဝါ ဘီပိုး
ကန်ထရိုက်တာများ နှင့် ယာယီအလုပ်သမား များ အတွက် ဘေး
နှင့် မေးခိုင် ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း လုပ်ငန်းများကိုလည်း
ကင်းလုံခြုံသောလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြရန် စီမံဆောင်ရွက်
သွား မည် ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအတွက် ဖြစ်ရပ်အား အစီရင် ခံခြင်းနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း စံနှုန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြဌာန်း သတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးသော ဖြစ်ရပ်များကို ကျွန်ုပ်တို့  အဖွဲ့အစည်း အတွင်း ပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှု မဖြစ်ရအောင် ကာကွယ် သွားရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်ရပ် များ ကို လည်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အထွေထွေသော ရှေ့ အလားအလာ အ တွက် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ပါသည်။ ကျန်းမာမှုအတွက် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ချက် အနေဖြင့် YIC ဆေး ဘက်ဝန်ဆောင်မှုမှ S&K စီမံကိန်းကြီးအတွက် ၁၉၉၉ ခုနှစ်ဇူလိုင် လကတည်းကပင် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိပါသည်။ ကျန်းမာ ရေး ဝန်ဆောင်မှုကို အလုပ်သမားများ သာမက မိသားစုဝင်များ ကိုပါ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ သတ္တုတွင်းရှိ အထက်တန်း ကျောင်း ၊ ရဲ နှင့် တပ်မတော်သားများ ၊ သံဃာတော်ကြီးများ နှင့် လက်ဝေခံ ကန်ထ ရိုက်တာများကိုပါကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အနီးအနားရွာပေါင်း (၃ဝ) ကျော်မှ ရွာသူရွာသားများကို လည်းကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ် ပေးပါသည်။ အိမ်နီးနား ချင်း ကောင်းပီသစေမှုကို အကျိုးပြုရန် ဖြစ်ပါသည်။ သတ္တုတွင်း ဆေးခန်းနှင့် သတ္တုတွင်း ဆေးရုံများသည် သတ္တုတွင်းမြို့ နှင့်ဆက် စပ် ပတ်သက်ကြသူများအတွက် ရည်ရွယ် ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်၍ YIC ဆေးဘက်ဝန်ဆောင်မှုမှာ ရန်ကုန် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေး အ တွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ သတ္တုတွင်းဆေးခန်း ယင်းသည် အဓိကအားဖြင့် သတ္တုတွင်း မတော်မဆမှု နှင့် အရေး ပေါ်ကယ်ဆယ်မှု အဓိကတာဝန်ဖြစ်၍ ရက်သတ္တပါတ်အတွင်း (၇) ရက်ပတ်လုံးနံနက် (၈)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီအထိ တာဝန်ယူ၍ ဝန် ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ဆေးခန်းဆရာဝန်သည် လိုအပ်လျှင် ( ၂၄ ) နာရီပတ်လုံး ဝန်ဆောင်မှုပြုလုပ်ပေးပါသည်။ 75
အရေးပေါ် တုံ့ပြန်မှု လေ့ကျင့်ခန်းများ ကိုလည်း ဌာန အလိုက်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပေးခြင်း၊ ဆေးဝါးများ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊
ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများကိုလည်း
ဓါတ်ခွဲခန်း၌ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ အထူးကုသမှု နှင့် ဆေးရုံ
ပုံမှန်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အလုပ်မဝင်ရောက်မီ ဆေးစစ်ခြင်း
တက်ခြင်းများ မှလွဲ၍ အထွေထွေ ဆေးကုသမှုများကို ဆောင်ရွက်
နှင့် S&K စီမံကိန်း၌ အလုပ်စတင်သူများကို ပုံမှန်စစ်ဆေး ပေး
ပါသည်။ ဆေးစစ်ခြင်းတွင် ကိုယ်ခန္ဓာ အပြင်ပိုင်း စစ်ဆေးခြင်းကို အရပ်နှင့် အလေးချိန်ရယူခြင်း၊ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းနှင့် သွေးဖောက် စစ်ဆေးခြင်း၊ အလုပ်သမားတိုင်းကို တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် ဆေး စစ်ပေးသည့်အပြင် အက်ဆစ်အငွေ့နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်သော နေရာများ၌ အလုပ်လုပ်သူများကို (၆)လတစ်ကြိမ် ဆေးစစ်ပေး ပါသည်။ သတ္တုတွင်းဆေးရုံ ကုတင် (၁၆) လုံးဆံ့ ဆေးရုံဖြစ်၍ ဆရာဝန် (၃)ဦး၊ သွားဆရာဝန် (၁) ဦး၊ နှင့် သူနာပြု (၆) ဦး၊ အကူသူနာပြု (၆) ဦး ခန့် ထား ပေး ပြီး အနာဂတ်တွင်တိုးချဲ့ခန့်ထားရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဆေးရုံ၌မေ့ဆေးပေးစက်တစ်လုံး၊ ဓါတ်မှန်ရိုက်စက်၊ သွေးဖောက် စစ်စက်၊ သွားဆေးကုခန်းသုံး လူနာထိုင်ခုံ၊ သွားဓါတ်မှန်ရိုက်စက်၊ အသံလှိူင်း ဓါတ်မှန်ရိုက်စက် (Ultrasound) များထားရှိပေးပါသည်။ ဆေးရုံအနေဖြင့် လူနာများ ကိုဆေး ကုသမှု ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ အလုပ်သမားများ၏ မိသားစုဝင်များ ၊ အရေးပေါ်ကုသမှုလိုအပ်သည့် လူနာများ၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ ဆေးစစ်ပေးခြင်းများကို ပြုလုပ် ပေးပါသည်။ ပြင်ပလူနာဆေးကုသမှုနှင့် အတွင်းလူနာ ဆေးကုသ မှုလုပ်ငန်း၊ အသေးစား ခွဲစိတ်ကုသခြင်းနှင့် အဓိကခွဲစိတ်ကုသခြင်း များ၊ထို့ပြင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များကို ဆေးကုသခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေး ထိုးခြင်း၊ တစ်နှစ်အောက် ကလေးများကို ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေး ခြင်း၊မျက်စိကွယ်မှုကာကွယ်ရန်ဗီတာမင်အေဆေးလုံးများဖြည့်စွက် ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက် ပါသည်။ ရန်ကုန်၌ဆေးကုသမှုပေးခြင်း ရန်ကုန်ရုံး၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသူများအတွက် YIC ဆေးခန်းမှ ဆေးဝန်ဆောင်မှု ပေးပါသည်။ အလုပ်မဝင်မီ ဆေးစစ်ဆေးခြင်း၊
အရည်အချင်း ပြည့်ဝလာစေရန် သင်ကြားခြင်း
ဒေသခံများအနေဖြင့် အထက်တန်းပညာသင်ကြား မှုမှာဖြစ်နိုင်ချေ
MYTCL သည်လွန်ခဲ့သော (၁ဝ) နှစ်ခန့်ကပင် သင်ကြား လေ့ကျင့်မှု
မရှိပါ။ MYTCL အနေဖြင့် ဤအချက်ကိုသတိပြုမိပါသည်။ သို့ ဖြစ်၍
စတင်ခဲ့၍ (၂၄)လ သင်ရိုးကုန်ဖြစ်ပြီး (၁၂) လမှာ သီအိုရီ စာတွေ့
လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး အစီအစဉ်အနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် လေ့ကျင့်
နည်းပညာရပ် သင်ကြားမှုအဖြစ် လည်းကောင်း၊ (၁၂)လမှာအလုပ်
သင်ကြားမှုကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် မြန်မာလူမျိုး နိုင်ငံသားချင်း
ခွင်လက်တွေ့သင်ကြားမှု အဖြစ်လည်းကောင်း ပါဝင်ပါသည်။ ဤ
ဗဟုသုတ ဖလှယ်၍ ခေတ်သစ် ကမ္ဘာ၌ အောင်မြင်မှုရရှိစေရန် အ
ကျွမ်းကျင်မှု သင်ရိုးကုန် ပြီးဆုံးအောင်မြင်ပြီးနောက် သင်တန်းသား
များသည် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း
လုပ်ကိုင်လို ကြသူများကို အထူးကြပ်မတ် လေ့ကျင့်သင်ကြား ရန်
ကာကွယ်ခြင်း၊ေ၇ှးဦးသူနာပြူသင်တန်း၊ ကွန်ပျုတာအခြေခံ ကျွမ်း
စီစဉ်လျက် ရှိပါသည်။ ပညာသင်ဆုများ၊ ငွေစာရင်းသင် တန်း များ၊
ကျင်မှုများနှင့် အင်္ဂလိပ်စာ တို့သင်ကြားထားပြီး ဖြစ်ကြပါသည်။
အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းများကို ဒေသခံများကို ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြင့်စီမံ
ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ ပြီးမြောက်ပြီးနောက် အသက်မွေးဝမ်း
ကိန်းဒေသအတွင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်များကိုလေ့
ကျောင်းမှုအမျိုးအစားအရ ခွဲ ခြားသတ်မှတ်ပြီး စီးပွားရေး၊ ပညာရေး
လာသင်ယူနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိလာရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့
အခွင့်အလမ်းကောင်း ရရှိ အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ပြင် ပင်လယ်ရပ်ခြားဒေသ အတွေ့အကြုံများကိုပါ ဗဟုသုတ ရရှိ စေနိုင်ပါသည်။
လေ့ကျင့်မှုဆောင်ရွက်ချက် MYTCL အနေဖြင့် နည်းပညာလေ့ကျင့်မှု အစီအစဉ်အဖြစ် သတ္တု
တွင်း၌ မိမိတို့နှင့်သင့်လျော်သောသတ္တု တူးဖော်ခြင်း၊ သတ္တုထုတ်
စံပယ်တောင်နှင့် ကြေးစင်တောင် လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်း အစီအစဉ်
လုပ်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းမှုဌာနခွဲများ ၌ ခန့်ထားပါသည်။ ယခု သင်တန်း
မှာလွန်ခဲ့ သော ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့ပြီးယခု (၈) ကြိမ်မြောက်
တက်နေကြသူ (၂၃) ဦးရှိပါသည်။ ယနေ့ အထိ (၁၄၄) ဦး သင်
အခမဲ့သင် ကြားမှုအစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ရေးဌာန၏ ရ
တန်း တက်ရောက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ည်ရွယ်ချက်မှာသင်တန်းသားများအနေဖြင့်အခြေခံဗဟုသုတများ ကို ရရှိနိုင်သည့်အပြင်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်၌လည်း အသုံးချနိုင်
သည့် ပညာစွမ်းရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအစီ
MYTCL အနေဖြင့် ဌာနတွင် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရန် ရည်ရွယ်လျက်
အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ကွန်ပျူတာ သင်တန်းများ ကို ဌာနခွဲ
အလုပ် သမား များအနေဖြင့်နည်းပညာဘာသာရပ်သင်တန်းများ
အလိုက် အခွင့်အရေးပေး ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ တွင်
သာမက ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့်စံနှုန်း အဆင့်များကိုပါရရှိ ခံစားနိုင်ပါ
သင်တန်း (၉) ခုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။
သည်။ ထိုအကြောင်းအရင်းများကြောင့် သင်တန်းသားများစွာ တို့သည်
ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာသင်တန်း
ပြင်ပ၌ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းများ အလိုက် ကုမ္ပဏီ များတွင်
ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ သတ္တု တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်း စံနှုန်းများ နှင့် အညီ
အလုပ်ရရှိကြပြီး အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာဌာနများ၌လည်း လုပ်ကိုင်နေ
ခေတ်ပေါ် နည်းပညာရပ်များသည် ဆန်းသစ် တီထွင်ပေါ်ထွန်း
လာသလို ကုန်ကျစရိတ် နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျှော့ချရန်၊
ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သုတေသန
ဌာနခွဲကို လုပ်ငန်း စီမံဆောင်ရွက်မှု ဌာနကြီးအောက်၌ အကောင်
ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ အလုပ်သမားတိုင်းကို
အပြည့်အဝပေးပြီး အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနည်းတူ ဖွံ့ဖြိုးအောင် တီထွင် ဆောင် ရွက် နေပါသည်။ ဘေးကင်းမှုနှင့်
လုပ်ငန်းခွင်နေရာတိုင်း၌ ဥာဏ်သစ်လောင်း သင်တန်း များဖြင့်
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ စီမံခန့် ခွဲမှုစနစ် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ
စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်
အသေးစိတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာထိန်းသိမ်းမှု လုပ်
စီမံမှုနှင့် အကျုံးဝင်ပါက်သက်၍ စံပယ်တောင် ကြေးစင်တောင် စီမံ
ထုံးလုပ်နည်းများကို တည်ဆောက်၍ အကောင်အထည် ဖော်
ကိန်းများတွင် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် အတူ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးမူဝါဒများနှင့် စံထား ချက်များ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ အရေးပေါ်တုန့်ပြန်မှု အစီအမံ ကို
ချမှတ်ကာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ယင်းမူဝါဒများ နှင့်ကိုက်
အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ထားပြီးသည့် အပြင် ဌာန
ညီ စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရည်မှန်း ချက် ပန်း တိုင် များနှင့်ညီ
တိုင်း၏ ဝန်ထမ်းများကို အခြေခံကျသော လက်တွေ့အသုံးပြုပုံ
ညွတ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့သည် SGS (SOCIETE GENERAL
များကို လေ့ကျင့်သင်ကြား စီမံထား ပြီး ဖြစ်သည် ။
DE SURVEILLANCE) နှင့်အညီ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စံပယ်တောင်နှင့် ကြေးစင်တောင်စီမံကိန်းတွင် အဓိကသဘာဝပတ်
ချိန်ဆုံးဖြတ်၍ MYTCL ၏ စီမံကိန်းတိုင်းအတွက် စီမံခန့်ခွဲ
နည်းပညာ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်၍ သဘာဝ
၁) အချဉ်ဓာတ်ရှိသော ကျောက်ဆောင်များ (ဖြစ်နိုင်ချေရှိ သည်မှာ
ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှုများကို နားလည်သိတတ်စေရန်
သတ္တုတွင်းနံရံများနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ ဖြစ်နိုင် ပါသည်။)
၂) ဘေးဥပါဒ်ဖြစ်စေသော သတ္တုပစ္စည်းများ၊ (ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်
ဒြပ်ပေါင်းများ၊ ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်နှင့် သတ္တုထုတ်လုပ်စဉ် ဓါတ်
မှုများအတွက် လျင်မြန်ထိရောက်စွာ တုန့်ပြန်နိုင်ရန်လေ့ကျင့်သင်
၃) စိုက်ပျိုးမြေထိခိုက်မှု (ကျယ်ပြန့်စွာ တူးဖော်ခြင်းကြောင့် မြေ
ကြား ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ထိခိုက်
မှုများအတွက် အားလုံးသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာစာချုပ်
၄) ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့် တိုက်ရိုက် မပတ်သက်သည့် စွန့်ပစ်
စာတမ်းများမှာ အရည်အသွေး မြင့်မားပါသည်။ မှတ်တမ်း များကို
အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ရန် ကောင်းစွာထိန်းသိမ်း ထားပါ သည်။
ယင်းတို့ကို သုံးသပ်၍ ခေတ်မှီစေရန်နှင့် စဉ်ဆက် မပြတ် တိုး
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာစီမံအုပ်ချုပ်မှု အစီအစဉ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာဝတ္တုပစ္စည်းများနှင့် သက်ရောက်မှု များကို
စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများကို နိုး
ကြား တက်ကြွစွာ အစဉ်တစိုက် စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်
ကမ္ဘာအဆင့်မီ သတ္တုတွင်းအဖြစ် တည်ရှိရန် စံပယ်တောင် နှင့်
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို
ခန့်ခွဲမှု စနစ်ဖြင့် ထိရောက်စွာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလျက် ရှိပါသည်။
တွေ့ရှိချက်အပြောင်းအလဲများ၊ ရလာဒ်များကို သုံးသပ်၍လို
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို စီစစ် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက်
ရှိပါသည်။ စကာင်္ပူနိုင်ငံ SGS လုပ်ငန်းစစ်မှ စစ်ဆေးကြသူများဖြင့်
MYTCL စီမံကိန်းရှိ လုပ်ငန်းအားလုံးအတွက် လက်မှတ်များကို
ပါသည်။ ၄င်းဖြစ်ရပ်သည် ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး
နှစ်လည်တွင်လည်းကောင်း၊ ISO 14001 နှင့် ISO 9001ကို နှစ်
၄င်းကဲ့သို့ ဖြစ်ရပ်များ နောက်ထပ်ပေါ်ပေါက်လျှင် တုန့် ပြန်နိုင်ရန်
ကုန်တွင်လည်ကောင်း စစ်ဆေးပါသည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ
စီမံချက်များ အဆင်သင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။
တွင် SGS လုပ်ငန်းစစ်အဖွဲ့မှ OHSAS 18001 လက်မှတ်အတွက်စစ် ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပါသည်။ MYTCL ဝန်ထမ်း များဖြင့် ဌာနတွင်း
စစ်ဆေးမှုအဖွဲ့ ဖွဲ့၍ SGS စီစစ်ရေးအဖွဲမှ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ
MYTCL အနေဖြင့် မြေဧရိယာ (၂၃ဝဝ) ဟတ်တာအထိ မြေငှား ရ
နှင့်အတူ (၃)လ တစ်ကြိမ် ဌာနတွင်း စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ
ကုန်းများ၊ ရှေးဟောင်း သတ္တုတူးဖော်ခဲ့သောတွင်းများ ပါရှိပါသည်။ သတ္တုရိုင်းများ တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့် သဘာဝမြေ အနေ
အထားများ မလွဲမသွေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ MYTCL
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ဖြစ်ရပ်များ၏ အစီရင်ခံစာသည် ၄င်း
အနေဖြင့် မြေယိုယွင်း ပျက်စီးမှု နည်းပါး အောင်အစွမ်း ကုန်ဆောင်
ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားမှုအတွက် တိုးတက်ပြောင်းလဲပြုပြင်မှုများ ကိုစောင့်
ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မှ စ၍ (၅) နှစ် စီမံကိန်း ဖြင့်
ကြည့်ဆောင်ရွက်ဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် သ
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး နှင့် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး အစီ အစဉ် များကို
ဘာဝကပ်ဘေး အန္တရာယ် တခုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ယင်းနှင့်ဆက်စပ်
ချမှတ်ထားပါသည်။ စံပယ်တောင်၊ ကြေးစင်တောင် စီမံကိန်းတွင်
ဒေသနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များကို အနည်း ဆုံးသာ ထိခိုက်စေရန် သတိ
၆.၅ အဆင့်ရှိငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် ငလျင်ငယ်ပေါင်း (၁ဝ)ကြိမ်
ပြုမှုဆောင်ရွက်ကြရန် စီစဉ်ထား ပါသည်။
လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။၄င်းရက်အနည်းငယ်အတွင်း အရှေ့မြောက်စွန့် ပစ်မြေစာပစ္စည်းပုံမှာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်၍ မရတော့ပဲ နိမ့်ဆင်းခဲ့
ဆိုးကျိုးသက်ရောက်သောနေရာများအား စီမံခန့် ခွဲမှု
ပါသည်။ လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲရေးပိုင်းနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့
S&K စီမံကိန်းတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားဆိုးကျိုး သက်ရောက်
ဖြစ်သည့် KNIGHT PIESOLD AUSTRALIAN အကြံပေး ကုမ္ပဏီ
စေနိုင်သော နေရာ (၉)နေရာကို ၂ဝ၁၂ခုနှစ်တွင် မှတ်တမ်းများ
တို့စစ်ဆေးကြပြီး ၄င်းဖြစ်ပွားမှုမှာ PUNCHING SHEER ကြောင့်ဟု
လည်း ပိတ်သိမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်ထိ တွေ့ရှိထား
မြောက်ဘက်ရှိ စွန့်ပစ်မြေစာ နိမ့်ဆင်း၍ အရှေ့ဘက်သို့ (၁၇) ကီ
သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်သည့် MYTCL ရှိနေရာအားလုံး ပြန်
လိုမီတာအထိ ရွေ့လျား ရောက်ရှိနေပါသည်။ စုပုံမှု ဖြစ်စဉ်ကြောင့်
လည် ပြုစုပျိုးထောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော သတ္တု
MYTCL အနေဖြင့် မြေစာစွန့်ပစ်နည်း စနစ်ကျနစွာ မပြုလုပ်ထားလျှင်
တူးဖော် ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်သော အမြုပ်ဖော်သတ္တု
စုပုံစွန့်ပစ် မြေစာများသည် ကျေးရွာများ အထိ ပြန့်နှံ့ရောက်ရှိ
သွားနိုင်ပါသည်။ ချက်ချင်း ဆောင် ရွက်မှုများကို ပြုလုပ်ပါသည်။
င်ညစ် ညမ်းစေသော နေရာများ ဖြစ်ကြပါသည်။ MYTCL အနေဖြင့်
မြေပြင်ရေနှင့် မြေအောက်ရေ လွှာ များကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပြီး
ယခင် တည်ရှိခဲ့သော ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်နေသည့် နေရာများ အား
ထိန်းသိမ်း ပြုပြင်ရန် တာဝန်မရှိပါ။
ထို့ကြောင့် မည့်သည့် ကြီးမားသော ထိခိုက်မှုမျိုးမှ မရှိခဲ့ပါ။ ချွင်းချက်
စံပယ်တောင်၊ စံပယ်တောင် (တောင်)၊ ဟင်းလင်းပွင့် လုပ်ကွက်
များ၊ သတ္ကုရိုင်း အပုံ လုပ်ကွက်များသည် လုပ်ငန်းစဉ် အတွင်း 85
ကျန်ရှိနေသည့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သော နေရာများ ဖြစ်ပါ
သို့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေုးလုပ်ငန်းများကို အချိန်ပြည့်ဆောင်ရွက်
သည်။ ယင်းနေရာများနှင့် အထက်ပါ (၉) နေရာများအား တဆက်
လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်ပျက်စီးသောမြေယာ အနည်းဆုံး အခြေအနေသို့
တည်း မိုင်းပိတ်သိမ်းပေးခြင်း၊ ပြန်လည်ပျိုးထောင်ပေး ခြင်းများ ပြု
စောင့်ရှောက်ပေးသွားနိုင်ပါမည်။ ဤပြန်လည် ထူ ထောင်ရေး အစီ
လုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ MYTCL ၏ လုပ်ကွက်များအား သဘာ
ဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်သည် Natural
Environment Protection Council of Australia ၏ စံချိန်စံညွန်း
(၃၆၃)ဟတ်တာကို ပြန်လည် ထူထောင်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ် ပါ သည်။
များအား ကိုးကားထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များ အတိုင်း စောင့်ကြပ်
၂ဝ၁၂ ခုနှစ် စီမံကိန်း၏ ပန်းတိုင် မှာ ၉.၁ ဟတ်တာတွင်
သစ်ပင်ပေါင်း (၁ဝဝဝဝ) စိုက် ပျိုး ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
မှု များစွာ ရရှိပါမည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ် ကတည်းက စုစုပေါင်း
အမှန်တကယ်အားဖြင့်ခန့်မှန်းခြေသစ်ပင်ပေါင်း(၁၁ဝဝဝ)ခန့် စိုက် သစ်ပင်၊ မြက်ပင်များမပေါက်ရောက်သည့် စွန့်ပစ်မြေများ ပြန်လည်
နိုင်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၂ခုနှစ် တွင် (၁ဝ) မြေ ဟတ် တာကို ပြန်လည် ထူ
ထောင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းတွင် လုပ်သားမြို့ဘောလုံး
MYTCL သည် မိုင်းလုပ်ငန်းကာလနှင့် နောက်ပိုင်းကာလတို့ တွင်
ကွက်များနှင့် မိုင်းမြို့တော်၏ တောင်ဘက်အလယ်ပိုင်းတွင် အပင်
ရန်အတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင် အဓိက တာဝန်ယူပါမည်။
ပေါင်း (၁ဝဝဝဝ) စိုက်ပျိုးပေးခဲ့ပြီး၊ အသစ်ထူထောင်ထားသောဒုန်း
မြေယာများ ဖရိုဖရဲဖြစ်မှု လျှော့ချရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
တောရွာအနီးစံပယ်တောင် စွန့်ပစ်မြေပုံ ဆင်ခြေလျောနေရာတွင်
အပင်ပေါင်း (၁ဝဝဝ)ကို ၁.ဝ ဟတ်တာပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးပေး
ခဲ့ပါသည်။MYTCL လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ဖရိုဖရဲဖြစ် နေ
ယခင် မိုင်းတူးဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြင့် မြေယာများဖရိုဖရဲ
သော မြေဟတ်တာ (၁.ဝ) ဧရိယာ အများအပြား ပေါ်တွင် အမျိုးမျိုး
သောသစ်စေ့မျိုးစုံ ကို ကြဲပက်စိုက် ပျိုးပေးခဲ့ပါသည်။ ၂ဝ၁၃ ခု နှစ်
တွင် S&K စီမံကိန်းများ အရဖရိုဖရဲ ဖြစ်နေသောဟတ်တာမြေ ၂၇.၃
ယခင်မိုင်းတူးဖော်ခြင်း၏ Tailing-spilling ဧရိယာများ၊
ပေါ်တွင် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်း အဖြစ် သစ်ပင် ပေါင်း
ယခင် မိုင်းတူးဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း မှ စွန့် ပစ်မြေပုံများ
(၃ဝဝဝဝ) နှင့် သစ် မျိုးစိတ် မျိုးစုံ ပါဝင်သော သစ်ပင်ပေါင်း (၁ဝဝဝ)
ကုမ္ပဏီသည် ယခင် မိုင်းတူးဖော်ခြင်းကြောင့် ဖရိုဖရဲ ဖြစ်သွားသော ဧရိယာများ၊ (၄င်းဧရိယာများသည်
ခန့် ကိုစိုက်ပျိုး ပေး သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
လည်း မိုင်းတူးဖော်ခြင်း မျှော်လင့်၍မရသောနေရာများ) တွင် သစ်
မြေယာများဖြစ်လာရန် သုံးနှစ်တာကာလ စီမံကိန်းဖြင့် ပြန်လည်ထူ
အငွေ့ပျံခြင်းနှုန်း အလွန်မြင့်မားပြီး မိုးရွာသွန်းမှုအဆင့် အသင့် အ
ထောင်ရေးကို ဖွံ့ဖြိုးဖြစ်ထွန်းအောင် ဆောင်ကျဉ်းပေး ရပါမည်။
တင့်သာရှိပါသည်။ စီမံကိန်း နယ်ပယ်အတွင်း ပါဝင်သောအပေါ်ယံ
ဤသုံးနှစ်လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို MYTCL ၏ နှစ်ပတ်လည်ပြန်လည်
ရေထုသည် အနည်းငယ်ခန့်သာရှိပြီး အောက်ပါ အတိုင်း အကျဉ်း
ထူထောင်ရေး အစီအစဉ်မှ တဆင့်ဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမည်။ ဤ
စိမ့်မြေဒေသ ရေချိုကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏ ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် မိုးတွင်းကာလတွင်
ရာ၊ ကြိတ်ခွဲသတ္တု ပို့ဆောင်ပေးသောနေရာနှင့် သတ္တုရိုင်းစုပုံထား
သော နေရာများ သို့ လည်း ပျံ့နှံ့စေပါသည်။ MYTCLသည် ဖုန်များ၊
အမှုန်များ သီးခြားဖြစ်စေသည့် နည်းပညာရပ်နှင့် ရေဖြင့်ပက်ဖြန်း
ပေး၍ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဟင်းလင်းပွင့် သတ္တုရိုင်း ကြိတ်ခွဲစက်ရုံမှ ကြိတ်ခွဲထားသောသတ္တုရိုင်း စုပုံထားသော နေရာများနှင့် သတ္တုရိုင်း
ကိုထိန်းချုပ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဓိကဖုန်နှင့်အမှုန်များ ထုတ်လွှတ်
လာသည့် ညစ်ညမ်းသောရေများကို စုစည်းထားသိုရန် ထိန်းချုပ်မှု
နေသည့် ဧရိယာများတွင် ဖုန်၊ အမှုန်များကိုစစ်ဆေးပေး သည့်
ရေကန်များကို အဆင့်ဆင့် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ Process
ကရိယာ (၃၅) ခုကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ လစဉ် မှတ်တမ်းတင်
Solution ရေကန်များကို အစဉ်စောင့်ကြည့် ထိန်းသိမ်းထားပြီး
ထားသော အခြေအနေအဆင့်အတန်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ချင်းတွင်းမြစ် နှင့် ယမားချောင်းများရေထုညစ်ညမ်းမှု
ကြီးပေါ်တွင်မြက်များ ဖုံးလွှမ်းရန်နှင့် ပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်းကို လုပ် ဆောင်ပေးပါသည်။ ဖုန်များထွက်ရှိမှုအခြေနေ အနည်းအများ အ
လိုက်ကွဲလွဲချက်များရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖုန်နှင့် အ
S&K စီမံကိန်း သတ္တုတူးဖော်ခြင်းပြုလုပ်နေသော ဧရိယာအောက်
ရေတိမ်ပိုင်း ရေအောက်လွှာတစ်ခု ရှိနေပါသည်။
ဤရေ အောက်လွှာ၏ ရေအနိမ့်အမြင့်သည် စွတ်စိုသောရာသီနှင့်
သောအခြေအနေများသည်အများအားဖြင့် ရာသီဥတုနှင့် ပက်သက်
နေပါသည်။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန်အတွက် (၃၁) နေရာမှ ရရှိ လာ
MYTCL သည် S&K စီမံကိန်းတွင် တွင်းငယ်ပေါင်း (၆ဝ)ကျော်
သောဆန်းစစ်ချက်များအရ မိုးရာသီကာလတွင် ဖုန်နှင့်အမှုန့်များ
တူးဖော်ပြီး မြေအောက်ရေ အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
ကျဆင်းရာလမ်းကြောင်းနည်းပါးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ဖုန်နှင့်အ
မြေအောက်ရေကို ဖောက်ထားသောတွင်းများ အတွင်းရှိ မျက်နှာ
ပြင်အောက်(၁ဝ) မီတာတွင် ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
တ္တုရိုင်းသယ်ယူပေးပို့မှုစနစ်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဤသို့
ဟင်းလင်းပွင့် သတ္တုတွင်းထဲမှ စိမ့်ထွက်လာသော ရေလွှာကို ရေစုပ်
ဖုန် နှင့်အ မှုန် များရခြင်းသည် ပူပြင်း ခြောက်သွေ့သော လများ
စက်ဖြင့် စုပ်တင်၍ ရေများ၏သန့်ရှင်းမှုကို စစ်ဆေးပြီး နောက် သန့်
အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။ အကြီး အကျယ်ဖုန်နှင့်အမှုန်များကျ
ရှင်း သောရေများကို ယမားချောင်း အတွင်းသို့ စွန့်ပစ်လိုက်ပါ
သည်။ လွတ်လပ်၍အမှီအခိုကင်းမဲ့သော ဓါတ်ခွဲ ခန်းမှ ၄င်းရေ
နမူနာများကို အစဉ်တစိုက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများလုပ်ပေး ပါ သည်။
ပွိုင့်DM-4 (မူလကြိတ်ခွဲစက်၏ အရှေ့ဘက်) သည် မတ်လနှင့် ဧပြီ
လများတွင်ဖုန်နှင့်အမှုန်များအကြီးအကျယ် ကျဆင်းလေ့ရှိကြောင်း ဖုန်များပြန့်လွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်း
သတ္တုတူးဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် လမ်းများပေါ်သို့ဖုန်များ၊ အမှုန်
ကျန်ရှိသောနေရာများ၏ ဖုန်နှင့်အမှုန်များကျဆင်းခြင်း ညွှန်းကိန်း
များ ယေဘုယျအားဖြင့် ပျံ့နှံ့စေပါသည်။ ထို့ပြင် ကြိတ်ခွဲသောနေ
အရရာသီမရွေးလက်သင့်ခံနိုင်သောပမာဏသာရှိပါသည်။ ခြောက် 87
သွေ့သောရာသီများတွင် မြင့်မားသော ဖုန်နှင့် အမှုန်များကျဆင်း
ရလာနိုင်ပါသည်။ ဤဒြပ်ပစ္စည်းများက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု ဖြစ်လာ
လေ့ရှိသည့်နေရာများမှာ အများ အား ဖြင့်ချဉ်းကပ်လမ်းများ၏ကပ်
နိုင် ခြင်း (သို့) ၄င်းတို့အား အသုံးချရာ၌ ထိန်း ချုပ်မှုမရှိခဲ့လျှင် ကျန်း
(Haul Roads) ၏ကပ်လျက် နေရာ များ ဖြစ်သည်။
MYTCL သည် ဝန်ထမ်းအားလုံးကို သင်တန်းပေးခြင်းနှင့် ဘေး အန္တရာယ်ဖြစ်ပွား နိုင်သော ကုန်ပစ္စည်းများ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် ကိုင်
ဆီးနှင်းမြူခိုးအတွင်း အက်ဆစ်ဓာတ်ပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးခြင်း
တွယ်ခြင်းအတွက် HAZMAT လမ်းညွှန်ချက်စာအုပ်ကို ထုတ်ပေး
ကြေးနီသတ္တုရိုင်း အစုအပုံအား အရည်ဖျန်း၍ ပျော်ဝင်စေရန်လည်း
ကောင်း၊လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့်ကြေးဖမ်းရာတွင်လည်းကောင်း(ElectroWinning) အက်ဆစ်ဓာတ်မြူမှုန့်များသည် လေထုအတွင်း ပြန့်လွင့် လာတတ်ပါသည်။ အက်ဆစ်ဓာတ်မြူမှုန့်(Acid Mist)များကိုသတ္တု ရိုင်းစုံပုံထားသောHeapပုံများအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်လစဉ် စစ်ဆေး ပေးခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း နေ့စဉ်လည်း SX-EW စက်ရုံ၏ (Tank– Houses) အတွင်းစစ်ဆေး ပေးရပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသည့် ရ လာဒ်များအရ အက်ဆစ်မြူမှုန့်များပါဝင်မှုသည် အကာအကွယ်မ ရှိဘဲထားသည့် အဆင့်အောက်သာရှိသဖြင့်လက်သင့်ခံနိုင်သော ရ လာဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤရလာဒ်သည်ဧရိယာအထဲသို့ တိုက်ရိုက်တိုင်း တာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လတ်တလော လေ့လာချက်ကို အနီးအနားရှိဘုန်းကြီးကျောင်းမှ တောင်းဆိုမှုဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း အက်ဆစ် ဓာတ်မြူမှုန့် အဆင့်ဆင့်ကို စစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Tank House တွင် Acid Mist တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း ပြုချက်အရ ပတ် ဝန်းကျင်သို့ အက်ဆစ်မြူမှုန့်ပြန့်နှံ့သက်ရောက်ခြင်းကိုလက်ရှိ တိုင်း တာချက်အရ မည်သို့ မျှ မတွေ့ ရပါ။
ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းများ MYTCL သည် မိမိ၏ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမျိုးမျိုး သော ပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်ပြုနိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ပေါက်ကွဲရေး ပစ္စည်းများကို
အန္တရာယ် ရှိသည့် ဒြပ်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး၊ ထိန်းချုပ် လုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာသဖြင့် ဖော်ပြပါ ဒြပ်ပစ္စည်းများ ကိုင် တွယ်အသုံးပြုခြင်း၊ တီထွင်ဖော်ဆောင်လာနိုင်ခြင်း၊ စွန့်စား ဆောင် ရွက် ရခြင်းလုပ်ငန်းကို အနည်းဆုံး အတိုင်းအတာ ဖြင့် ဆောင်ရွက်၍
ကျေးလက်ဒေသ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှု ဆိုင်ရာ
သတ္တုတူးဖော်ရေးမှ ထွက်လာသည့် စွန့်ပစ်မြေများတွင် ပြင်ပလေ၊
ရေတို့နှင့် ထိတွေ့သည့်အခါ အက်ဆစ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်ကန့် နှင့်
ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း
အောက်ဆီဂျင်ရောရာသတ္တုများလည်း ပါဝင်တတ်ပါသည်။ MYTCL
ကျင့်သုံးသည့် မူဝါဒအရ သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ် ငန်းများမှ
ရှင်းရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်း စဉ်များ
ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်မည့် မည့်သည့် အရာမျှ စွန့်ပစ်ခြင်း
ကိုပညာပေးဟောပြောပြီးကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု လျှော့ချ ရေးများကို
အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။ MYTCL သည် ပတ်ဝန်း
စီမံရပါသည်။ စွန့်ပစ်မြေများကို ရွှံ့စေး မြေများ ဖြင့် ပြင် ဆင်ထားပြီး
ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ အဆင့်ရှိသော သိပ္ပံနည်း
ရွှံ့စေးမြေများဖြင့် ဘောင်ခတ်ထားသည့် မြေကွက်ပေါ်တွင်သာပုံစေ
ကျဖြစ်သည့် လျှော့ချ၊ ပြန်သုံး၊ ပြန်လည် ထူ ထောင်၊ လေးစားမှု
ပြီးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့မှုမရှိ စေရန် ပြုလုပ်ပါသည်။
နည်းလမ်းလေးသွယ်ကို အသုံးပြုပါသည်။ ၂ဝ၁၄ ဇူလိုင်လ အထိ
မိုးရွာသောကြောင့် ၄င်းစွန့်ပစ်မြေများမှ စီးထွက် လာသည့် ရေ
ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း
ရေးဌာနသည်လစဉ်လစဉ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆွေးနွေး အ
ကြံပြုခြင်းများပြုလုပ်သွားမည်။ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့မှ ရေကောင်းရေသန့် 
ဖြင့်တင် ပို့စေပါသည်။ မိုးရွာသဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် သတ္တုလုပ်ကွက်
ရရှိရေး၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီး
အတွင်းရှိအက်ဆစ်ရောရေများကို သိုလှောင်ကန်အတွင်းသို့ လည်း
လိုအပ်သောအကူအညီ နှင့် အကြံဥာဏ်များ ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါ
ကောင်း၊ ကြေးပါဝင်သော အရည်ထုတ်လုပ်သည့်နေရာမှ ထွက်လာ
သည့်ရေများကိုလည်းကောင်း၊ သဘာဝဘေးကြောင့်ထွက် ပေါ်လာ သည့်အက်ဆစ်ရောရေများကိုသိုလှောင်ကန်အတွင်းသို့
ရန်လည်းကောင်း၊ ရေများကိုမူ မြေသား အဖြုန်းစွန့် ပစ် နေရာသို့ရေစုပ်စက်များဖြင့်တင်ပို့ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်းသတ္တုထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ထွက်လာသည့် ရေများ အားလုံးကို ပတ်ဝန်းကျင်သို့ လုံးဝမရောက်ရှိရန်စီမံထားပါသည်။ အဆိုပါ အက်ဆစ်ရောရေများကို ကြေးနီပါဝင်သည့် အရည်ထုတ် လုပ်ရာ သတ္တုမြေများ ပေါ်သို့ရေဖြန်းသည့် နေရာတွင် ပြန်လည် အသုံးပြုခြင်းဖြင့်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းမှထွက်ရှိနိုင်သော အက်ဆစ် ပါဝင်နိုင်သည့် ရေများကို တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပြန်လည် အ သုံး ပြုခြင်း ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ လုံးဝမရောက်ရှိပဲ ရှိနေပါသည်။
ဒေသခံများကို ပဏာမ ပံ့ပိုးမှု လုပ်ဆောင်ချက်များ
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် MYTCLသည် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် ကုန် ပ
စ္စည်းတင်သွင်းမှုများအတွက်နိုင်ငံတော်အတွင်းFEC ၇ဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ ကျခံသုံးစွဲခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် မှန်းခြေအားဖြင့် အလုပ် သမား ၁၇ဝဝ ကျော် ကို အလုပ်ခန့်သွားမည် ဖြစ်သည်။ Myanmar
ရွှေ့ပြောင်းရွာများသို့အခြေခံစားသောက်ကုန် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ဆေး စသည့်ဖြင့် လှူဒါန်းခြင်း၊
ဒေသတွင်းရှိ ရွာများအတွက် Company မှ သောက်ရေသုံးရေ ဖြန့် ဖြူးပေးခြင်း၊
Yang Tse Copper Limited နှင့် Myanmar Wanbo Mining Company Limited သည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွင်း FEC ၂၃၁,၉ဝဝ နှင့် မြန်မာကျပ်ငွေ ၉၅၈,၇၈ဝ,၄၅ဝ ကို ဒေသတွင်း နေထိုင်သူများ ၏လိုအပ်ချက်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ပံ့ပိုးကူညီ လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ထို့ အပြင်
အဖြစ်အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေး မည်ဟုကတိပြုပါသည်။
ဒေသတွင်းရှိ ရွာအားလုံးကို အခမဲ့ ဆေးကုသမှုပေးခြင်း၊
MYTCLနှင့်MWMCLအနီးအနားရှိရွာများတွင် ပညာတော် သင် ဆု နှင့် အခြားပညာရေးဆိုင်ရာ လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ လယ်မြေ ဆုံးရှုံးသွားသူများအား ရွာများ ပြောင်းရွှေ့တည်ဆောက်ပေးပြီး အခြေကျလုပ်ငန်းစုများကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
Company တွင် အလုပ်မလုပ်သော သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် သားထောက်နောက်ခံ
အရင်းအနှီး စိုက်ထုတ်ပြီး မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ စီစဉ်ပေးခြင်း၊ •
ဒေသတွင်းရှိ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သော ထူးချွန်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ကြေးပေးပြီး ၄င်းတို့ကျောင်းပြီးသွားချိန်တွင် ဆန္ဒရှိပါက သင့်တော်သော အ လုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းကောင်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊
ဒေသခံများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာ (၂၈) ရွာမှ လူနာ စုစုပေါင်း (၁ဝဝဝဝ) ကျော်ကို ကျန်းမာရေး အကျိုးပြု အစီအစဉ်အရ ကုသပေးခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖြစ် ဆရာဝန် (၃) ဦး၊ သူနာပြု (၆) ဦး၊ အကူသူနာပြု ( ၅ ) ဦး၊ အထွေထွေအကူ (၃)ဦး စုစုပေါင်း (၁၃) ဦး ပါဝင်သော နယ်လှည့်ဆေးကုသမှု အဖွဲ့ဖွဲ့ထားသည်။ ဒေသ တွင်းရှိ
လှူဒါန်းထားပါသည်။ ထို့ အပြင် မိုင်းမြို့အထက်တန်းကျောင်းတွင် ကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲများ လစဉ်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ဝ န်ထမ်းများမှဒေသတွင်းရှိရွာများသို့သွားပြီးကျန်းမာရေး အသိပညာ ဖြန့်ဝေခြင်းများပြုလုပ်ပေးပါသည်။ အစိုးရကျန်းမာရေးဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းကာကိုယ်ဝန်ဆောင် များနှင့်
ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်ပေး သည်။ ၄င်းအဖွဲ့သည် နေအိမ်နှင့်ကျောင်း များသို့ တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး နှင့် အမှိုက်စွန့်ပစ်မှု တို့ကိုသွား ရောက်စစ်ဆေးပေးသည်။ အာဟာရတိုက်ကျွေးမှု အစီအစဉ် အဖြစ် ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် မှစပြီး သုံးနှစ်အောက် ကလေးငယ်များအား ကိုယ်အလေးချိန် စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း များနှင့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို များစွာ အထောက်အကူပြုပါသည်။ မိုင်းဧရိယာရှိ ကလေးသူငယ် များနှင့် အရွယ်ရောက်သူများကို ကူညီခြင်းသည် ပိုမို ကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လူများ ကျန်းမာစွာ နေထိုင်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ MYTCL သည် ဤ ကမ္ဘာမြေကို
အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု ယခင်လုပ်ငန်းရှင် MICCL (မြန်မာအိုင်ဗင်ဟိုးကောပါးကုမ္ပဏီ) ကို
အသက် (၆ဝ) တိုင်အောင် အကျိုးခံစားခွင့် အပြည့်နှင့် အမြဲတမ်း ဝ
ဒါရိုက်တာ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အုပ်ချုပ်စီမံပြီး အလုပ်
သမားဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းနေရာများအများစုကို မြန်မာလူမျိုးများအ
နောက်နှစ်ပိုင်းတွင် အခြားနေ့စားအလုပ်သမား ၃ဝဝ အား MYTCL
တွက်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ အထက်ပိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်မှု နေရာ
တွင် လုပ်ငန်း အနေအထားအရ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း ခန့်အပ်သွားပါ
များကိုအမှတ်(၁)သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်းမှ အငြိမ်းစား အမှုထမ်းများနှင့်
မည်။ ဤအရေအတွက်သည် တည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းများအောင်
ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်အကိုင် နေရာ (၈၄၅) နေရာ အတည်ပြုထားပြီး၊
ဝန်ထမ်းများအား မိခင်ဌာနများတွင်နေရာပြန်လည်ချထားခြင်း၊ လ
နေ့စား အလုပ်သမား ၁ဝဝ ကျော် ခွင့်ပြု ထား ပါသည်။ လုပ်ခလစာ
စာတိုးမြှင့်မရရှိပဲ နေ့စားဝန်ထမ်းအဖြစ် (၁၅)နှစ်ကြာလုပ်ကိုင် ခဲ့သူ
တိုးမြှင့်ရရှိရန် အလို့ငှာ မိခင်ဌာနမဟုတ် သော နေရာများတွင်
များ (သို့) ပိုမိုကောင်းမွန်သောဝင်ငွေရရှိရန် အလုပ်အကိုင် နေရာ
ပြောင်းလဲနေရာချခြင်းများ ပြုလုပ်ထားသဖြင့် လုပ်ငန်းဌာနများတွင်
ပြောင်းလဲခြင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံဇယားကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းထားပါ
မျှော်မှန်းထားသလောက် အောင်မြင်မှုမရရှိမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။
သည်။ နေ့စားဝန်ထမ်း အဖြစ် ၁၅ နှစ်ကြာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သူများ အား
MYTCL ၏ လက်ထက်တွင် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့်
များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အရ မှတ်သား ချီးမြှင့်သွားမည် ဖြစ်
များမှသေချာစွာလေ့လာသုံးသပ်ပြီး MYTCL အထက်ပိုင်း အုပ်ချုပ်မှု
သည်။ တူညီဝတ်စုံများကိုလည်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးပါသည်။
နှင့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သိသာထင်ရှားေ
ကုမ္ပဏီ၏တိုးတက်မှုသည် လာမည့်နှစ်များတွင်လည်း တစ်ဆင့်ပြီး
တစ်ဆင့်၊ အောင်မြင်မှု တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆက်လက်တည်ရှိနေရပါ
၂ဝ၁၂ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ခန့်မှန်းခြေ အလုပ်သမား ၁၃ဝဝ အား
အကျိုးအမြတ်များ ကို ၄င်းတို့ နှင့် မျှဝေခွဲယူသွားမည် ဖြစ်သည်။
များအား ၆၅နှစ်တိုင်အောင် အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် ကန်ထရိုက်စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးခန့်အပ်သွားရန်ဟူသောအထူးပေါ်လစီတစ်ရပ်ကို ပြဌာန်း
ခဲ့သည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းနှင့် အတွေ့အကြုံရှိ ပညာရှင်များအား နှစ်
ပိုင်ရှင်အသစ် ပြောင်းလဲခြင်းအပေါ် တွေဝေမှုများရှိနေသည့် သူ
အကန့်အသတ်မရှိလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည်။ အသက် ၆ဝ နှင့်အထက်
များအား စည်းရုံးဆွေးနွေးရန် သတ္တုတွင်း စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန တစ်ခုစီမှ
ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် အထက်လူကြီး၏ ထောက်ခံမှုဖြင့်သော်
လူများဖြင့် လုပ်ခလစာပေးပိုင်ခွင့် ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းထားသည်။
၄င်းကော်မတီသည် ကုမ္ပဏီ ၏ အတွင်းပိုင်း ဝန်ထမ်း စွမ်းအင်မြင့်
ဆင့်ကွာခြားမှုရှိစေကာမူ ဝန်ထမ်းများ အနာဂတ် အတွက် ပြင်ဆင်
သော ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် တွန်းအားပေးမည် ဖြစ်
နိုင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အခွင့်အရေးတူ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်
နိုင်ရန်အတွက် ကော်မတီမှ ဝန်ထမ်းအဆင့်အလိုက် မျှမျှတတ နှင့် တူညီစွာဆောင်ရွက်မည်။
အသည်းရောင် B ပိုးနှင့် HIV မူဝါဒီ ဝန်ထမ်းသစ်များသည် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းဖြစ်ရန် လုပ်ငန်းခွင်အကြို
ဆေးစစ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ပိုးတွေ့ရှိသူများကို
ဝန်ထမ်းများ၏ အရေးပေါ်နှင့် အထူးကျန်းမာရေး ခံစားခွင့် ဥပမာ-
ဝင်ရောက် အလုပ်လုပ်ရန် လက်မခံပါ။ လိုအပ်ချက်အရ ရှိနေသော
ဖျားနာခြင်း၊လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းထိခိုက်မှု၊မီးဖွားခွင့် နှင့် နာရေးကိစ္စ
ဝန်ထမ်းများ (အမြဲတမ်း၊ ယာယီ၊ နေ့စား) အားလုံးကိုကာကွယ်မှုပြု
များကို MYTCL မှ ပံ့ပိုးကူညီမည် ဖြစ်သည်။
လုပ်ပေးရုံသာကမရောဂါပိုးရှိနေသူများလုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ် ခွင့်ပြုရန်ကိုလည်းသေချာစွာပြန်လည်သုံးသပ်မည်။
သတ္ထုတွင်း လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုပေါ် တာဝန်ယူခြင်း
ဘေးကင်းလုံခြုံသော လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်စေရန် ဝန်ထမ်းအားလုံးကို
MYTCL သည် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၏ လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်အရ
ဆေးစစ်ခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း ပေါ်လစီအသစ်များ ပြုလုပ်
အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းနှင့် ကန်ထရိုက်ဝန်ထမ်းများကို အသက်အာမခံ
ထားပေးမည်။ နောင်လာမည့် အနာဂတ်ကာလများတွင် ဝန်ထမ်း
HIV ပိုးစစ်ဆေးရမည်။ HIV ပိုး
ရှိသူများကို MYTCL မှ မိသားစုဝန်ထမ်းများအား ဆွေးနွေးမှုများ
အားလုံးအတွက် ဥပဒေအရ အာမခံထားပေးမည်။
ပြုလုပ်၍ မိသားစုဝင်များကိုလည်း အခမဲ့လာရောက် ဆေးစစ်ရန်၊ ကျန်ရှိနေသော ဘဝကို မည်သို့ဆက်လက်ရှင်သန် သွားရန် လမ်း
MYTCL ဝန်ထမ်းများ ဝန်ထမ်းကာလ ပြီးဆုံးသည့်အခါ ငွေပမာဏ များများရရန်အတွက်ဝန်ထမ်းနှင့်MYTCLတို့အတူတကွ နောင်ရေး
အသက် (၆ဝ) နှစ်အထက်ရှိသူများ အလုပ်လုပ်ရန် သင့်တော်ခြင်း၊
လစဉ် လခထုတ်ချိန်များတွင် ဘဏ်မှာရှိသော ဝန်ထမ်းများ အနာ
မသင့်တော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသော ပြဌာန်းချက် မရှိပါ။
ဂတ်အတွက် စုဆောင်းငွေခေါင်းစဉ် အောက်တွင် ဝန်ထမ်းမှ ၄င်း
MYTCL သည် အသက် ၆ဝ နှင့် အထက် အဖိုးတန်ဝန်ထမ်း
လစာ၏ ၃ % နှင့် ကုမ္ပဏီမှ ဝန်ထမ်းအတွက် စုငွေ ၂ခု လုံးကို 97
အချိန်မရွေး ကူညီ ဖြေရှင်းပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
ဝန်ထမ်းမှ ခံစားခွင့်ရမည် ဖြစ်သည်။
MYTCL သည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာများကို အလေးထားရုံသာမက အထွေထွေဆန္ဒမွန်
တစိတ်တပိုင်း အဖြစ်ပါဝင် လုပ်ကိုင်ရခြင်းကိုများစွာ ဂုဏ်ယူမိပါ
ဤဒေသခံလူများသည် ဤနေရာတွင် အမြဲရှိနေကြမည် ဖြစ်သဖြင့် MYTCL သည် S&K အဖွဲ့ အစည်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရွာသူရွာသားများ နှင့် မိသားစုသဖွယ် အတူတူဖြစ်သည်ဟု ခံယူထားပါသည်။ MYTCL အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှ မိတ်ဆွေများ နှင့် မိသားစုသဖွယ်
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပွဲများ နှင့် ဘာသာရေးပွဲများ အားလုံးတွင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူ့အဖွဲ့အ စည်းများ ကိုလှူဒါန်းခြင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ အ ခါကြီးရက်ကြီးများတွင်ဘုန်းကြီးများ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများဆောက် လုပ်လှူဒါန်းခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ရန်ရှိပြီး MYTCL အနေဖြင့် နှစ်စဉ် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကူညီပံ့ပိုးမည် ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုများ ပျော်ရွှင်အပန်းဖြေရန် အလို့ ငှာ ဒီဇင်ဘာလ၌ အားကစားပွဲများ၊ သင်္ကြန်ရေသဘင်ပွဲများ၊လွတ် လပ်ရေးနေ့ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲများ ပြုလုပ်ပေးမည် ဖြစ်ပြီးလစဉ်ဘာသာ ရေးနေ့ များတွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် လှူဒါန်းခြင်းများပြုလုပ် မည်ဖြစ်သည်။ မိုင်းမြို့အတွင်း ဝန်ထမ်းများ လူနေမှု သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် အလို့ငှာ အခြားသော လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း ဆောင်ရွက် သွားမည်။ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများ၏အိမ်ရာနေရာများလိုအပ်သလိုစီမံပေးခြင်း၊ ရေသန့်စက်များတပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ လမ်းများပြုပြင်ပေးခြင်း၊ လျှပ်စစ် မီးများတပ်ဆင်ပေးခြင်း၊လုံခြုံရေးနှင့်မည်သည့်ဘေးဒုက္ခမျိုးကို မဆို
သတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီးနောက် သို့မဟုတ်
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်အတွက် အောက်ပါ လုပ်ငန်းများဖြင့် ပြည့် စုံ
စီမံကိန်း အစိတ်အပိုင်း တစ်စုံ တစ်ခု မဆောင်ရွက်နိုင်လျှင်သော်
အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
လည်းကောင်း၊ အကျိုးအမြတ် ရရှိနိုင်ချေ မရှိလျှင်သော်လည်း
ငှားရမ်းဒေသအတွင်းရှိ တွင်းတူးပေါက်များနှင့် ဟင်းလင်းပွင့်
ကောင်း၊ ပိတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆောင်ရွက်မှု ပစ္စည်းအားလုံး
တွင်းများကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းဖို့ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထား
ကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခြင်းဖြင့် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းကို အပြီးသတ်
ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ကူးပုံဖော်မည့် သတ္တုတွင်းပိတ်
သိမ်းမှုစီမံချက် တစ်ရပ်ကို လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲရေး အပိုင်းမှ ရုပ်လုံးဖော်
ကိုဖြေလျော့ညီညာစေ၍ သဲများ၊ အပေါ်ယံမြေလွှာများ ဖုံးအုပ်
ဆောင်ရွက်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်ဖြင့် သတ္တုတွင်း
ထားပြီး ဒေသရင်းအပင်များ ပြန်လည်ပေါက်ဖွားစေရန်။
ပိတ်သိမ်းမှုကို အခြေခံထား စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်။
ကျန်ရှိသောပေါက်ကွဲပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်ဆေးပစ္စည်းများ၊ ဟိုက်
အားလုံးသော အဆောက်အဦးများ အထောက်အကူပစ္စည်း
အခြေခံသည့် စီမံချက်သည် အလုံးစုံ အကျုံးဝင် ပတ်သက်သည့်
များအားလုံးကို ဖျက်သိမ်း၍ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြီး ပြန်လည်
သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်၍ ဆောက်လုပ် မှုရေးရာ သို့မဟုတ်
တည်ထောင်ဆောင်ရွက်မှုများကို ခန့်မှန်းကာလ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင်
အဆုံးသတ် နိဂုံးချုပ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ MYTCL ၏သတ္တုတွင်း ပိတ်သိမ်းမှုစီမံချက်တွင် အောက်ပါ အဓိကရည်မှန်းချက် လေးခု ပါ ဝင်၍ ပိတ်သိမ်းမှု အဆင့်ဆင့်တွင် အကျုံးဝင် ပတ်သက် စေပါသည်။ ၁။
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိစ္စကို ကာကွယ်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြည့်ဆည်းမှု အားလုံး မြေပေါ်မြေအောက် တို့၌ မလိုအပ်လျှင် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးရန၊
(တောင်)၊ ကြေးစင်တောင် ဒေသများပါဝင်ကြပါသည်။ ပေါင်းစပ်
သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းမှု စီမံချက်သည် နှစ်စဉ် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ
သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းပြီးနောက် ပတ်ဝန်းကျင်
စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်၍ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု ရလာဘ်များ ရရှိ
ရေးရာဆိုးကျိုးများ လျှော့နည်းစေရန် (သို့မဟုတ်) ပပျောက်ရန်
အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ MYTCL သည် သတ္တု
တွင်းဒေသ၌ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုး ဖြစ် ထွန်း
စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းမှု လျော့နည်းအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ သတ္တုတွင်း ပိတ်သိမ်းမှုစီမံချက်သည် ဘေးကင်း၍ တည်တံ့သော မြေအနေအထားများ၊ လေနှင့်ရေတို့ တိုက်စားခြင်းမှ ကင်းဝေး အောင် ဖန်တီးထားပေးရန်၊ မြေယာအနေဖြင့် စိုက်ပျိုး ထွန်ယက်နိုင် သည့် အခြေအနေရှိအောင် ဖန်တီးပေးထားရန်၊ မြေအနေအထားကို
အောင် လေ့လာစီစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့အား ငါးနှစ်အထိနေ၍ ထိန်း
အောင် ဖန်တီးပေးရန်၊ ၄။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး မြန်မာယန်စီကြေးနီကုမ္ပဏီလီမိတက် (MYTCL) သည် အရည်အသွေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံတို့၏ စံချိန်စံနှုန်းများနှင့် တပြေးညီရှိစေရန် ပေါင်းစပ် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်(IMS) ကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ ပေါင်းစပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (IMS) သည် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုနီးပါးခန့် MYTCL ဝန်ထမ်းများနှင့် အုပ်ချုပ်မှုအဆင့်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ဝိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးကူညီမှုကြောင့်
လုပ်ငန်းစနစ် တစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နေပါသည်။ Myanmar Yang Tse Copper Ltd. ကို ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါကြောင်း ထောက်ခံပါသည်။ လုပ်ငန်းစစ် ကာလအတွင်းအဓိက ပြုပြင်မွမ်းမံရန် လိုအပ်ချက်များ မရှိသည့်အတွက် MYTCL ၏ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းအရ အထက်ပါအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားရှိပါသည်။ SGS
၏ သတ္တုတွင်းရှိရာ မုံရွာဒေသနှင့် ရန်ကုန်ရုံးတို့မှ တင်ပြသည့်
အချက်အလက်များနှင့် မှတ်တမ်းများအပေါ်တွင် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သုံးသပ်မှုများသည် လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် IMS Coordinator တို့၏ မိမိတို့လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် နားလည်သဘောပေါက် သည့် အတိုင်းအတာအား စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အစီရင်ခံစာ တင်ပြချက်အပေါ် သုံးသပ်ချက်အရ လုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရှိကြောင်း တွေ့ရှိ ရပါသည်။ စံချိန်စံညွန်းတိုင်းအတွက် ရှင်းလင်းသော ရည်မှန်းချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်များ ထားရှိပြီး လုပ်ဆောင်ချက်များအား ပုံမှန်စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးလျက် ရှိပါသည်။ အချက်အလက်များအပေါ် သုံးသပ်ရာတွင် ရည်မှန်းချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ MYTCL ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည် ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ရမည့် အညွှန်းသော့ချက်များကို အထောက်အကူပြုသည့်အပြင် World Bank သတ်မှတ်ချက် အဆင့်ထက် လျှော့နည်းနေကြောင်းလည်း စိတ်ချယုံကြည်ရပါသည်။ သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းမည့် စီမံချက်နှင့်အညီပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်မှုလုပ်ငန်း အရှိန်အဟုန်သည်လည်း လုပ်ငန်းခွင် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု များမှလည်းကောင်း၊ ARD Issue အပေါ် ထိထိရောက်ရောက် စီမံဆောင်ရွက်ချက်အရ လည်းကောင်း အောင်မြင်လျက် ရှိနေပါသည်။ ဤနိုင်ငံတကာ အကဲဖြတ်မှု လုပ်ငန်းတာဝန်သည် MYTCL နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန် အဆင့်ဆင့်ရှိ တာဝန်ရှိများမှ မိမိတို့အသိဖြင့် စေတနာအလျှောက် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့လုပ်ငန်း၏ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုသူများအနေဖြင့် MYTCL စီမံကိန်းများ၏ လုပ်သက်တလျှောက်လုံး လူမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အာမခံချက် ဆက်လက်ပေးသွားရန်နှင့် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းသွားသည့်အခါ အနာဂတ်ကာလတွင် ရေရည်အသုံးပြုနိုင်သော ဒေသကြီးတစ်ခုအဖြစ် တည်ထောင်သွားပါမည်။
Knight Piesold Pty Limited သည် S&K စီမံကိန်းတွင် ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တိုင်အောင် ထူးထူးခြားခြား ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ Australia နိုင်ငံ Perth မြို့ရှိ Knight Piesold ရုံးချုပ်နှင့် စကာင်္ပူနိုင်ငံရှိ ရုံးခွဲတို့မှ S&K စီမံကိန်းအား ဘူမိနည်းပညာ ရပ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ဝန်ဆောင်မှုများ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ Knight Piesold သည် ဘူမိနည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးအနေဖြင့် သတ္တုတွင်းဒေသ၏ ဘူမိနည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ စုံစမ်းလေ့လာခြင်း နောက်ဆက်တွဲ ပုံစံဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် သတ္တုအရည်ကန် (SolutionPond)၊ ရေပို ရေလွှဲကန် ( Storm Water Pond) နှင့် အရည်ထိန်းတာတမံ (Tailing Dam) တို့နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော သတ္တုရိုင်း မြေစာပုံ(Heap Leach Pads)များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဟင်းလင်းပွင့်တူးဖော်ရန် ဘူမိနည်းပညာအကြံဥာဏ်များနှင့် ဟင်းလင်းပွင့် သတ္တုတွင်း (၂)ခု တည်ဆောက် အကောင်အထည်ဖြော်ခင်းတို့အား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ Knight Piesold သည် လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်းအား ပုံစံဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးခြင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်စွမ်းလေ့လာစုံစမ်းခြင်းများကို လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ယင်းတွင်
(Open Pit Dewatering Pond) တို့အား စုံစမ်းလေ့လာခြင်းနှင့် ပုံစံဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းတို့အပြင် စွန့်ပစ်မြေစာပုံနှင့် အက်ဆစ်အနည်အနှစ် ထားသိုမည့်ပုံစံ ဒီဇိုင်းများအတွက်လည်း အကြံပြုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ် ကာလတလျှောက်လုံး S&K စီမံကိန်း၏ ဌာနပေါင်းစုံနှင့် ဌာနအသီးသီးများမှ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းစွမ်းတမံ ကူညီဆောင်ရွက်မှုကိုလည်းကောင်း၊ QA/QC လုပ်ဆောင်ချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုကို လည်းကောင်း၊ Knight Piesold ကုမ္ပဏီ၏ စံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင် ပေးခြင်းကြောင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတင်းမွှေးသည့် အကြံပေးလုပ်ငန်းကြီးအဖြစ် မှတ်ယူသွားအောင် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းတို့အား လှိုက်လှဲဝမ်းသာစွာ တင်ပြအပ်ပါသည်။ တချို့သော ဘူမိနည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများသည် လုပ်ငန်း တည်ဆောက်မှု တိုးတက်လာမှုအပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ရေးဆွဲထားသော ပုံစံဒီဇိုင်း၏ လက္ခဏာသွင်ပြင်များနှင့် ဖီလာဆန့်ကျင် နေသည်ကို မလွှဲမသွေ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် ထိုလိုအပ်ချက်များကို ကျော်လွှားအောင်မြင်ရန် ကွင်းဆင်း အင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ထူထောင်ရန်လိုအပ်လာပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် S&K မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ဝန်ထမ်းများက စိတ်ပါလက်ပါ ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှလည်းS&K စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသော geomembrane liner subgrade Construction လုပ်ငန်း၊ QA/QC စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း၊ အခင်းပြားများ ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုခြင်းနှင့် သင်တန်းပို့ ချပေးခြင်းတို့ ပံ့ပိုးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ Knight Piesold အနေဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် လုပ်ငန်းများတွင် အကန့်အသတ်ကဏ္ဍတစ်ရပ်ရှိသော်လည်း
ဝန်ထမ်းများ၏ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ရေအရည်အသွေး အထူးကြပ်မတ် စောင့်ကြည့်သည့်လုပ်ငန်းကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းနှင့်အညီ အသုံးချသွားနိုင်အောင် ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့် Knight Piesold သည် S&K စီမံကိန်းအား ကုန်လွန်ခဲ့သော ကာလများအတွင်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရသည်ကို ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုများအားလည်း အထူးထောက်ခံမှုပေးသကဲ့သို့
ထပ်ခါတလဲလဲရှိနေမည်ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
ဂျွန်ဘာရယ် အကြီးတန်းဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာ KNIGHT PIÉSOLD PTY LTD စကာင်္ပူနိုင်ငံ 103
Come Visit Us Facebook Address www.facebook.com/pages/Myanmar-Wanbao-Mining-Copper-Limited www.facebook.com/MyanmarYangTseCopperLimited www.facebook.com/myanmar.yangtse Wordpress Address myyangtsecopper.wordpress.com mywanbaocopper.wordpress.com/ Website Address www.myanmaryangtse.com www.myanmaryangtse.com.mm
Miki & Wallis
Strategy Report for Safety, Health and Environment
2012-2013 Strategy Report for Safety, Health and Environment for environment friendly and sustainable copper mining in Myanmar.